Search results for Android firmware | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts sorted by relevance for query Android firmware. Sort by date Show all posts
Android နှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့် သမျှ ဗဟုသုတ
Android OS အကြောင်းကို သိစေဖို့ အတွက် ကိုယ် ကိုယ်တိုင် မရေးပေမဲ့ မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေ များအတွက် အခြေခံ သဘော တရား
လေး များကို မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ်။
Android ကို စတင် လေ့လာဖို့ ကျိုးစားနေ သူတွေ အနေနဲ့ အများပြော နေကြတဲ့ Bootloader, Firmware, ADB, Stock ROMs,
Custom ROMs, OS Kernel, ClockworkMod, Flashing, Rooting, Baseband စ သဖြင့် စာလုံး အထူး အဆန်း တွေချည်း
တွေ့ရလို့ လေ့လာ ချင်စိတ်ကုန် သွားတတ် သလို တစ်လုံးချင်းစီနဲ့ သူတို့ရဲ့ သီးသန့် အလုပ် လုပ်ပုံကို အတိ အကျ မသိရင် နာမည်သာ
ခေါ်နေပေမယ့် အနှစ်သာရ မဲ့နေ တတ်ပါတယ်၊ တကယ်လေ့လာ လိုသူတွေ အနေနဲ့ လဲ တစ်ခုစီရဲ့ အဓီပါယ်နဲ့ အသုံးဝင်ပုံ အသေးစိတ်
အလုပ် လုပ်ပုံ တို့ကို သေချာ သိကို သိထား ရပါမယ်။
ဒီပို့စ်မှာ အထက်က စာလုံးတွေ အကြောင်း ရှင်းပြပေး သွားပါမယ်၊ တကယ့် ပညာရှင် အဆင့် တက်လှမ်း ချင်သူတွေ အတွက် Open
Source ဖြစ်တဲ့ Android က မည်သူ မဆို ဒေါင်းယူနိုင်ပြီး ကြိုက်သလို ဖြတ်နိုင် ပြင်နိုင် ပါတယ်၊ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းနိုင်ပြီး မိမိနဲ့ အ
သင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ System တစ်ခု ဖြစ်သွားတဲ့ အထိ ပြုပြင် ယူလို့ ရပါတယ်။
Bootloader ဆိုတာ ဘာလဲ
Bootloader ဆိုတာက Operation System မစ တင်ခင် အလုပ် လုပ်တဲ့ Code အစိတ် အပိုင်း လေးကို ခေါ်ပါတယ်၊ Bootloader
ထဲမှာ OS kernal ကို စတင် အလုပ် လုပ်အောင် ခေါ်မယ် ညွန်ကြားချက်တွေ ပါပါတယ်၊ Bootloader က Internal Memory ထဲ
မှာ ရှိတဲ့ Paratition တွေ အားလုံး ရဲ့ ပထမဆုံး Partition မှာ တည်ရှိတာ ဖြစ်ပြီး အခြား Partitions တွေ အားလုံးကို သွား
မယ့် Check Point ပါပဲ။
Bootloader ဘယ်လို အလုပ် လုပ်တာလဲ
Power စဖွင့် တာနဲ့ ROM ထဲမှာ ရှိတဲ့ Boot ROM Code က စပြီး အလုပ် လုပ်ပါတယ်၊ ပြီးရင် Bootloader လို့ ခေါ်တဲ့ Boot Strap
Firmware ကို နိုးမယ်၊ Boot Strap Firmware ထဲမှာ MBR and GRUB/LILO တို့ ပါဝင်တယ်၊ Bootloader အလုပ် စပြီ ဆိုတာနဲ့
init.S ဖိုင် စ အလုပ် လုပ်တယ် ၊ အရင် ဆုံး BSS segment ကို0တန်ဖိုး ရောက် သွားအောင် ရှင်းတယ်၊ ပီးရင် main.c ဖိုင်ကို စခေါ်မယ်၊ main.c ဖိုင် စ အလုပ် လုပ်တာနဲ့ hardware အစိတ် အပိုင်း တွေ ဖြစ်တဲ့ clocks, board, keypad, console တို့ကို စတင် စေမယ်၊ ပြီးရင် Linux Tags ကို ဖန်တီးပြီး Linux Kernel image ကို Memory ကနေ ၀င်တင်မယ်။
Bootloader က Phone မှာ ပါဝင်တဲ့ အခြားမည်သည့် software မဆိုရဲ့ အဦးဆုံး စတင်တဲ့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ processor ကို
အသုံးပြုဖို့ အလွန် အရေးကြီး လှပါတယ်၊ Android OS က Open Source ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖုန်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ တွေက သူ
တို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်း Hardware နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Bootloader version ကို Develop လုပ်ထား ကြပါတယ်၊ Android ဖုန်းတွေ
မှာ ပါဝင်တဲ့ Bootloader တွေကို အမြဲတမ်း Locked ချထားပါတယ်၊ ဒီလို လုပ်ထား တာကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ တွေကို သူ
တို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်းကို သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ OS version နဲ့ပဲ တွဲသုံး စေချင်လို့ပါ၊ Bootloader ကို Locked လုပ်ထားရင် Custom
ROM install လုပ်လို့ မရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် Custom ROM Install လုပ်လိုရင် Bootloader ကို အရင် Unlock လုပ်ရ ပါတယ်။
Kernel ဆိုတာက Android တစ်ခုထဲမှာ သာလျှင် ရှိတာ မဟုတ်ပဲ IOS,MacOS,Window,BlackBerry's QNX တို့မှာလဲ ရှိပါတယ်၊ High Level Operation Systems အားလုံးမှာ Kernel တစ်ခုတော့ ပါဝင် ပါတယ်၊ ခု ပြောမှာက Android အကြောင်း ဆိုတော့ Linux Kernel ကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ပြောသွား ပါမယ်၊ Android သုံးသမျှ ပစ္စည်းတွေက Linux Kernel ကို သုံးကြပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် Linux Operation System က သုံးတဲ့ Kernel နဲ့တော့ တထပ်တည်း မတူပါဘူး၊ Android Kernel မှာ Android အ
တွက် သီးသန့် Build-in code တွေ ပါနေပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့်ပဲ Developers တွေနဲ့ hackers တွေ အတွက် Android Versions
အသစ် တွေကို Android ဖုန်းအဟောင်း တွေမှာထည့်သွင်းပြီး အားလုံး အဆင်ပြေပြေ အလုပ် ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အတော့ကို စောင့်ရ ပါတယ်၊
Gingerbred kernel အတွက် သုံးတဲ့ drivers တွေက Ice Cream Sandwich kernel အတွက် အလုပ် လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီကိစ္စက လဲ အရေးကြီး ပါတယ်၊ Kernel ရဲ့ အဓိက အလုပ်က Hardware ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တာဝန်ကို ယူထား လို့ပါ၊ kernel ကိုရေး
တဲ့ ကုတ်တွေလဲ တကယ့်ကို များလှပါတယ်၊
Kernel ရဲ့ အဓီက တာဝန် ကတော့ Hardware နဲ့ Software တို့ကြားမှာ နှစ်ဖက်ညွန်ကြားချက် တွေကို နားလည်အောင် လုပ်ကိုင်
ပေးဖို့ပါပဲ၊ Software တစ်ခုက ဘယ်လို အလုပ်မျိုး ကိုမဆို Hardware ကို လုပ်စေချင် တဲ့ အခါကျရင် Hardware ကို တိုက်ရိုက်
အမိန့် မပေးပဲနဲ့ Kernel ကို ညွန်ကြားချက် အရင် လှမ်းပို့ ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ အလုပ် ဆိုတာက ဖုန်းက လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ် အားလုံး
ကို ညွန်း ပါတယ်၊
ဖုန်း Screen အလင်းရောင် ချိန်တာတို့၊ အသံ အနိမ့် အမြင့် ချိန်တာတို့၊ Raido ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆို တာတို့၊ ဖုန်း မျက်နှာပြင်
မှာ ပုံဆွဲတာတို့ စသဖြင့် အလုပ် မှန် သမျှကို Software က လုပ် လိုတဲ့ အခါကျရင် Hardware ကို တိုက်ရိုက် မခိုင်းပဲ Kernel ကို
လှမ်းခိုင်း လိုက် ပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့ အခါ မှာ Kernal က တဆင့် Hardware ကို လုပ်မယ့် အလုပ်ကို ညွန်ကြား ပါတယ်၊
ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်း မျက်နှာပြင် ပေါ်မှာ က ကင်မရာ (Camera) ရိုက်တဲ့ ခလုပ် မှာ ကလစ် တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တယ်
ဆိုပါစို့၊ ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကို software က Event တစ်ခုကို နားထောင်လို့ရမယ် ရတဲ့ Event ဖြစ်ပေါ်တဲ့ နေရာကို driver ကတဆင့် Kernel ကို ပို့မယ်၊ kernel ကလဲ ရလာတဲ့ အချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ command ကို Camera hardware ကို လှမ်းပို့မယ်၊
Camera Hardware က ဓါတ်ပုံကို ရိုက်ပေးမယ် ဒီလို Software တစ်ခု က Input လုပ်လိုက်တာကို Kernel က ယူပြီး Output
တစ်ခု အဖြစ် Hardware ကို ပြန်ပေး ပါတယ်၊
အကယ်၍ Kernel သာ မရှိခဲ့ ရင်တော့ Developers တွေက အလုပ် တစ်ခုစီ အတွက် အလွန့် အလွန် များပြားလှတဲ့ machine Code တွေကို ရေးပြီး Hardware ကို ခိုင်းစေ ရမှာဖြစ် ပါတယ်။
Kernel က ကြားခံ ပေးထားတဲ့ အတွက် Application Developers တွေ အနေနဲ့ Android System API's တွေ ကနေ တစ်
ဆင့် Kernel ဆီကို Resquest တွေ အလွယ်တစ်ကူ ပို့နိုင်ပြီး Kernel နဲ့ ချိတ်ဆက် အလုပ်လုပ်ဖို့သာ Develop လုပ်ရမှာဖြစ်သလို
Hardware Developers တွေကလဲ သူတို့ Develop လုပ်တဲ့ Hardware ကို Kernel နဲ့ ဆက်သွယ် အသုံးပြုနိုင်အောင် Develop လုပ်ပေး စရာလိုပါတယ်။
CWM ဆိုတာကတော့ ClockWorkMod ကိုဆိုလိုပါတယ်၊ CWM ကို Android သုံး ဖုန်း နဲ့ Tablet တွေ Recovery လုပ်ဖို့ သုံးပါတယ်၊
ဒီလို CWM သုံးပီး recover လုပ်တာ ကိုပဲ CWM recovery လို့ ခေါ်ပါတယ်၊ CWM recovery လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Stock Recovery နဲ့
မလုပ်နိုင်တဲ့ Data ပြန်လည်သိုလှောင်ခြင်း root access ရယူခြင်း အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းထဲက data တွေကို Backup လုပ်ခြင်း Custom
ROM ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်း Kernel တပ်ဆင်ခြင်း စသဖြင့် အလုပ်တွေ အများကြီးကို လုပ်သွားနိုင် ပါတယ်၊ Android အခြေခံ အ
ဆင့် ကို နားမလည် သေးသူတွေအတွက် ClockWorkMod ကိုသုံးပြီး Recovery လုပ်ရင် အခက်အခဲ တွေ့နိုင်သလို CWM recovery
က အစွမ်းကိုလဲ သဘောပေါက်ဖို့ ခက်ခဲနေ ပါအုံးမယ်။
Android Devices တွေ အားလုံး recovery console ကို ဖုန်း အတွင်း ပိုင်း memory ထဲ ထည့်ပြီး ကုမ္မဏီ တွေက ထုတ် လုပ်
ရောင်းချ ပါတယ်၊ recover console ကနေ Boot တက်နိုင် ပါတယ်၊ အကယ်၍ မလိုလား အပ်တဲ့ ပြသနာတွေ တက်လာပြီ ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ Factory Reset သုံးပြီး Recover လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် zip ဖိုင်နဲ့ လာတဲ့ official ROM ကို Update လုပ်
နိုင်ပါတယ်၊ ဒီလို အချက်လောက် သာလျှင် လုပ်နိုင်တာပါ Custom Recovery ကတော့ သူ မတူတဲ့ အလုပ် မျိုးကို လုပ်နိုင် ပါတယ်၊
Custom Recovery ကတော့ Stock Recovery လို မဟုတ်ပဲ Stock Recovery လုပ်နိုင် သမျှ ကို လုပ်နိုင်တဲ့ အပြင် ကိုယ် ပိုင် Android ကို စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ် နိုင်အောင် အဆင့်မြင့်တဲ့ Options တွေ ပါလာပါတယ်၊
Custom Recovery ကို သုံးရင် တရား ၀င်ကော တရား မ၀င် ROMs တွေကိုပါ Install လုပ်နိုင် ပါတယ်၊ အခြား Application
Update လုပ်ခြင်း Themes ပြောင်းခြင်း Kernel ပြောင်းလဲခြင်း Zip ဖိုင် အသုံးပြုခြင်း User Data အပါအ၀င် ဖုန်း Partition တွေ
အားလုံးကို ဖြတ်နိုင်ခြင်း SD cards Partition ခွဲခြင်း Dalvik Cache များဖြတ်ပစ်ခြင်း Permission များပြောင်းလဲခြင်း resotre
နဲ့ Backup မှာ စိတ်ကြိုက် အစိတ်အပိုင်း တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း နဲ့ အခြား အခြား သော အလုပ်တွေ အများကြီးကို စိတ်ကြိုက် လုပ်နိုင်
ပါတယ်၊ ClockWorkMod recovery ကို Koushik Dutta က Develop လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ Android ROM Manager ကိုDevelop လုပ်
တဲ့ သူပါပဲ၊ သူ့ရဲ့ Hacking away at Android devices ဆိုတဲ့ Blog နဲ့ Twitter မှာ သူ့ကို ရှာတွေ့နိုင် ပါတယ်၊
Firmware နဲ့ ပတ်သက် သမျှ
Firmware ဆိုတာက ROM (read only memory) ထဲကို ထည့်ရေး ထားတဲ့ Software program ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ Window computer တွေမှာ သုံးတဲ့ window7 install လုပ်သ လိုပါပဲ၊ ဖုန်း အတွက် Firmware Install လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ Froyo,
Gingerbread,HoneyCamb,ICS,Jelly Bean,Kitkat တို့လို Android Version တွေကို Phone မှာ Install လုပ်ခြင်းပါပဲ။
ဖုန်းတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ Firmware နဲ့ installation Tool တွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းမှာ ကြိုက်တဲ့ firmware ကို
သုံးနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်၊ ROM ဆိုတာက မူရင်း အဓိပါယ် Read-Only-Memory ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ ဒီတော့
read only ဖတ်လို့ပဲ ရမယ် ရေးလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့၊ ဒါဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ပြီး ROM ထဲက Firmware ကို Update လုပ်
နိုင် မှာလဲလို့ တွေးစရာပါ၊ သဘော တရား အရတော့ ROM ထဲမှာ Firmware ရှိတယ်ပေါ့ ၊ နောက်ပိုင်း မှာတော့ Developer တွေက
ROM ရဲ့ အပြင်မှာ Firmware ကို ထည့်ရေး ကုန်ကြပါတယ်၊ ဖုန်းရဲ့ Firmware ကို ROM လို့လဲ ခေါ်တယ်၊ အကြောင်း ကတော့ သီအို
သီသဘောမှာ Firmware က ROM ထဲမှာရှိတယ်၊ ROM ဆိုတာ Read Only Menory, ရှေ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေ မှာတော့ Firmware
က ROM ထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ယနေ့ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Firmware ကို ROM မထည့်တော့ပါဘူး၊ Firmware ကို ဖုန်းရဲ့ internal flash meonry ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်၊၊ internal flash meonry က Read Only မဟုတ်ဘူး ဒါ့ကြောင့် firmware အသစ် တစ်ခုကို flash လုပ်လို့ ရတာပေါ့၊
Flashing လုပ်တယ်ဆိုတာက Eloctronic Device ဖြစ်တဲ့ Phone ထဲကို firmware ထည့်သွင်းတာကို ဆိုလိုပါတယ်၊ Flashing လုပ်ခြင်းက ROM ထဲမှာ ရှိတဲ့ Data တွေကို ပြန်ရေး ခြင်းပါပဲ၊ Android ဖုန်းမှာ Custom ROMs ကို Stock ROMs အစား Flashing လုပ်ပြီးတော့ ဖုန်းထုတ်တဲ့ ကုမ္မဏီက ထည့်သွင်းပေး လိုက်တဲ့ Functions တွေကို ပြောင်းလဲ ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Unlimited ၀န်
Android System ရဲ့ Hardware Layer အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Linux Kernel ကို လိုသလို ထိန်းချုပ်လို့ ရနိုင်မယ့် အခွင့် အရေး ရချင်လို့
Root access လုပ် ကြပါတယ်၊ ဒီ အခွင့်အရေး ရယူနိုင်ခြင်း ကိုပဲ Root Access ရတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်၊ Root Access ရသွားရင်
Android File System ကို စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်၊
Android File System ထဲမှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့ အလွှာ (Partitions) ၆ ခု ကို လိုသလို အသုံးချ နိုင်ရင် Booting နဲ့ ပတ်သက်
တဲ့ Process တွေ အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင် သလို File System ထဲက တန်ဖိုးတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်မှူ တွေကိုလဲ လိုသလို ပြုပြင်နိုင် ပါပြီ၊
ဒါတင် မကပါဘူး ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက် SSH (Secure Share protocol) (သို့) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (သို့) DNS(Domain Name Server) နဲ့ Proxy Servers တွေကို လဲ အ
Android System ရဲ့ လုပ်ဆောင်မူ တွေထဲက ရပ်ချင်သမျှ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကိုလဲ ရပ်ထားနိုင်တဲ့ အပြင် Arbitrary commands
တွေလဲ အသုံးပြုနိုင် သွားပါတယ်၊ အခြား အခြား သော အချက်တွေ အများ အများကြီး ကိုလဲ လုပ်နိုင်ပါ သေးတယ်၊ ဒီ အချက်တွေက
Root လုပ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ၊ ဒါကိုပဲ Rooting လုပ်တယ်လဲခေါ်ပါတယ်
ထုတ်လုပ်သူ တွေက သူတို့ရဲ့ Device တွေကို ရောင်းချတဲ့ အခါ Software restrictions တွေ ပါလာ ပါတယ်၊ ဒီလို Software
Restrictions တွေ ပါလာရတဲ့ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်၊ တစ်ချို့ ကုမ္မဏီတွေ ကတော့ သူတို့ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုတဲ့ သူတွေကို ကာကွယ် ပေးဖို့ ဆိုပြီး Restrictions ထည့် ပါတယ်၊ ဘယ်လို အကြောင်း ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကန့်သတ်ချက် တွေ ပါဝင်နေ ခြင်းဟာ
Android ဖုန်း (သို့) Tablet ကို သုံးတဲ့ သူ လိုအပ်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါ မျိုး (သို့) အဆင့်မြင့် တဲ့ ပြင်ဆင်မှု
ပြုလုပ်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ကာဆီး နေတတ် ပါတယ်၊ ဒီလို အကာ အဆီးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် Root access ရဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။
Rooting လုပ်ခြင်းက Android သုံး ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေက ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကန့်သက်ချက် တွေကို ချိုးဖြတ်ပြီး soft
ware ကို အကန့် အသတ် မရှိ အသုံးပြုခြင်း ပါပဲ၊ ဒီလို Rooting လုပ်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော် တို့ကို ကန့်သတ် ထားတဲ့ Android
ပစ္စည်း ရဲ့ အစိတ် အပိုင်းမှာ ရေးချင်တာ ရေးနိုင်သလို ပြုပြင်လို သမျှကို ပြုပြင် သွားနိုင်ပါတယ်။
Custom ROM နဲ့ Stock ROM တို့ ဘာကွာလဲ
Stock ROM နဲ့ Custom ROM ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိမယ်၊ Stock ROM က ဖုန်း ၀ယ်တုန်းက ပါလာတဲ့ Phone Operation System. Stock
ROM မှာ Software Restriction တွေ ထည့်သွင်း ထားတဲ့ အတွက် စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုခွင့် မရတဲ့ Operation System ဖြစ်နေ
ပါတယ်၊ Custom ROM ဆိုတာကတော့ OS Version တစ်ခု ပါပဲ၊ Custom ROM ထဲမှာလဲ Stock ROM တွေ လိုပဲ Android Device တစ်ခု လုံးကို အလုပ် လုပ်စေတဲ့ Kernel ပါတယ်၊ System Applications တွေ ပါမယ်၊ Services တွေပါမယ်၊ တစ်ခုပဲ ကွဲသွား
တာက စိတ်ကြိုက် တည်ဆောက် ထားတဲ့ ROM ဖြစ်ခြင်းနဲ့ Software Restriction တွေ မပါခြင်း ပါပဲ၊ ဒီတော့ Custom ဆိုတဲ့ စ ကားလုံးက က ဘာကို ရည်ညွန်းလဲ၊ Android က Open Source ဖြစ်တဲ့ အတွက် Developers တွေက Stock ROMS တွေ အခမဲ့ ယူလို့ရတယ်၊ ပီးရင် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်လို့ရတယ် ဖျက်ပစ်လိုရာ ဖြတ်ထုတ်နိုင်တယ်၊ ထပ်ထည့် လိုတာ ထပ်ထည့်နိုင်တယ်။
အရည် အချင်းရှိရင် ရှိသလောက် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲပြီး စိတ်ကြိုက် ROM ကို တည်ဆောက် ယူနိုင်တယ်၊ ဒီလို စိတ်ကြိုက် တည်ဆောက် ထားတဲ့ ROM ကိုပဲ Custom ROM လို့ခေါ်တာပါ၊
ADB ရဲ့ မူရင်း စာလုံး ကတော့ Android Debug Bridge ပါ၊ သူ နာမည် အတိုင်း ပါပဲ သူက ဖုန်းကို ပြုပြင်ဖို့ အတွက် ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖုန်းကြား ချိတ်ဆက် နိုင်တဲ့ တံတား တစ်စင်းပါ၊ Android Phone က Linux Kernel ကို အခြေခံ ထားပါတယ်၊ ဒီတော့ computer
adb server ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူတာ ကနေ ဖုန်း ရဲ့ adb Client ကို Linux commands တွေ လှမ်းပို့နိုင် ပါတယ်၊ ဒီလို လုပ်ပြီး commands တွေကို အလုပ် လုပ်စေနိုင် ပါတယ် ဖုန်း အလုပ် လုပ်ပုံတွေ မမှန်တော့တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဒီနည်းကတော့ အမှား ရှာပြီးပြင်ဆင်
ဖို့ တကယ့်ကို အသုံးဝင် တဲ့ နည်းပါ၊ ဒီနည်း အတိုင်း ADB Server ဖြစ်တဲ့ Computer ကနေ ADB Client ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းကို Linux Commands တွေ ပို့ပြီး အလုပ် မလုပ်ဖူးသေး ရင်တော့ မိတ်ဆွေ ADB ရဲ့ အသုံးဝင် မှူကို ခံစားဖူးအုံး မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။
Baseband ဆိုတာ ကတော့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ Raido ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ ဖုန်း Version နဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ အလိုက် Raido
Version တွေလဲ ကွာပါတယ်၊ Raido File တွေကို Recovery tools တွေကနေ Flash လုပ်နိုင် သလို ADB/ODIN တို့ ကလဲ
Flash လုပ်နိုင် ပါတယ်၊ Raido (သို့) Modem နဲ့ ROM Version တို့ ကိုက်ညီမှု မရှိရင် တော့ MMS, 3G data, VM နဲ့ Network
ဒါကြောင့် အသုံးပြု နေတဲ့ ROM နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Radio (သို့) Modem ကို ရွေးချယ် နိုင်ဖို့ လိုသလို ဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ network နဲ့
bandwidth တို့ကိုလဲ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ Raido Firmware က Network ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် low-level functions တွေကို သုံးပြီး Wi-Fi နဲ့ GPS တို့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်စေ ပါတယ်၊ အကယ်၍ ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပြသနာ
မျိုး Android Device မှာ တွေ့ကြုံနေ ရပြီဆိုရင်တော့ Radio Firmware ကို Update လုပ်ဖို့ လိုပါပြီ၊ Radio Firmware ကို Update လုပ်ခြင်းက Range နဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာ မှာ ဖြစ်သလို Bettery အသုံးပြုမှု ကိုလဲ ရှော့ချပေးနိုင် ပါတယ်၊
ဖုန်းထဲမှာ Baseband Radio Processor Chipsets တွေ ပါဝင် ပါတယ်၊ ဒီ Chipsets တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အတွက် Software မျိုး
စုံ ကိုလဲ ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေက Develop လုပ်ကြပါတယ်။
Credit to BrighterMyanmar
မောင်ပေါက်ဆိုဒ်မှ ကူးယူ မျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, July 26, 20144comments:
ကဏ္ဍ Android, မိုဘိုင်းဖုန်းဆောင်းပါး
Service သမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ Andriod နှင့်ပတ်သက်၍ ဒါတွေ သိပြီးပြီလား?
Android ကို စတင် လေ့လာဖို့ ကျိုးစား နေသူတွေ အနေနဲ့ အများပြော နေကြတဲ့ Bootloader , Firmware,
ADB , Stock ROMs, Custom ROMs, OS Kernel,ClockworkMod, Flashing , Rooting , Baseband
စသဖြင့် စာလုံး အထူးအဆန်းတွေခြည်းတွေ့ရလို့ လေ့လာချင်စိတ်ကုန် သွားတတ်သလို့၊ တစ်လုံး စီနဲ့သူတို့ရဲ့
သီးသန့် အလုပ်လုပ်ပုံကို အတိအကျ မသိရင် နာမည်သာခေါ်နေပေမယ့်အနှစ်သာရ မဲ့နေတတ်ပါတယ်၊ တ
ကယ်လေ့လာလိုသူတွေအနေနဲ့ လဲ တစ်ခုစီရဲ့အဓီပါယ်နဲ့ အသုံးဝင်ပုံအသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို သေချာ
သိကိုသိထားရပါမယ်၊ ဒီပို့စ်မှာ အထက်က စာလုံးတွေအကြောင်း ရှင်းသွားပေးပါမယ်၊
တကယ့် ပညာရှင်အဆင့် တက်လှမ်း ချင်သူတွေ အတွက် Open Source ဖြစ်တဲ့ Android ကမည်သူ မဆို
ဒေါင်းယူနိုင်ပြီး ကြိုက်သလို ဖြတ်နိုင် ပြင်နိုင် ပါတယ်၊ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင် မိမိနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တဲ့
System တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ အထိ ပြုပြင်ယူလို့ ရပါတယ်။
Bootloader ဆိုတာက Operation System မစတင်ခင် အလုပ်လုပ်တဲ့ Code အစိတ်အပိုင်းလေးကိုခေါ်ပါ
တယ်၊ Bootloader ထဲမှာ OS kernal ကို စတင်အလုပ် လုပ်အောင် ခေါ်မယ် ညွန်ကြားချက်တွေပါ ပါတယ်၊
Bootloader က InternalMemory ထဲမှာရှိတဲ့ Paratition တွေအားလုံးက ရဲ့ ပထမဆုံး Partition မှာတည်
ရှိမှာဖြစ်ပြီး အခြား Partitions တွေ အားလုံးကို သွားမယ့် Check Point ပါပဲ၊ Bootloader ဘယ်လို အလုပ်
လုပ်တာလဲ Power စဖွင့်တာနဲ့ ROM ထဲမှာရှိတဲ့ Boot ROM Code က စပီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ပီးရင် Boot
loader လို့ခေါ်တဲ့ Boot Strap Firmware ကို နိုးမယ်၊ BootStrap Firmware ထဲမှာ MBR and GRUB /
Bootloader အလုပ် စပြီဆိုတာနဲ့ init.S ဖိုင် စ အလုပ် လုပ်တယ် ၊ အရင်ဆုံး BSS segment ကို0တန်ဖိုး
ရောက်သွားအောင်ရှင်းတယ် ပြီးရင် main.c ဖိုင်ကို စခေါ်မယ်၊ main.c ဖိုင် စအလုပ်လုပ်တာနဲ့ hardware
အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ clocks, board,keypad, console တို့ကိုစတင်စေမယ် ပီးရင် Linux Tags ကိုဖန်
တီးပြီး LinuxKernel image ကို Memory ကနေ တင်မယ် Botloader ရွေးချယ်မှု Bootloader က Phone
မှာပါဝင်တဲ့ အခြား မည်သည့် software မဆိုရဲ့ အဦးဆုံး စတင်တဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ processor ကိုအသုံး
ပြုဖို့ အလွန် အရေးကြီးလှ ပါတယ်၊
Android OS က Open Source ဖြစ်တဲ့ အတွက်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေက သူတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်း
Hardware နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Bootloader version ကို Develop လုပ်ထားကြပါတယ်၊
Android ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Bootloader တွေကို အမြဲတမ်း Locked ချထားပါတယ်၊ ဒီလို လုပ်ထားတာ
ကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ တွေက သူတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်းကို သူတို့ ထုတ်လုပ် တဲ့ OS version နဲ့ ပဲ
တွဲသုံးစေချင်လို့ပါ Bootloader ကို Locked လုပ်ထားရင် Custom ROM install လုပ်လို့မရဘူး ဒါကြောင့်
CustomROM Install လုပ်လိုရင် Bootloader ကို အရင် Unlock လုပ်ရပါတယ်၊
Kernel ဆိုတာက Android တစ်ခုထဲမှာ သာလျှင် ရှိတာ မဟုတ်ပဲ IOS, MacOS, Window, BlackBerry's
QNX တို့မှာလဲ ရှိပါတယ်၊ High LevelOperation Systems အားလုံးမှာ Kernel တစ်ခုတော့ ပါဝင်ပါတယ်၊
ခု ပြောမှာက Android အကြောင်းဆိုတော့ Linux Kernel ကိုပဲ ဦးတည်ပြီးပြောသွားပါမယ်၊
Android သုံးသမျှ ပစ္စည်း တွေက Linux Kernel ကို သုံးကြ ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် LinuxOperation System
က သုံးတဲ့ Kernel နဲ့တော့ တထပ်တည်းမတူပါဘူး၊ AndroidKernel မှာ Android အတွက် သီးသန့် Build
-in code တွေ ပါနေ ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့်ပဲ Developers တွေနဲ့ hackers တွေ အတွက် Android Versions
အသစ်တွေကို Android ဖုန်း အဟောင်း တွေမှာ ထည့်သွင်း ပြီး အားလုံး အဆင်ပြေပြေ အလုပ်ဖြစ်အောင်
လုပ်ဖို့ အတော့ကို စောင့်ရပါတယ်၊
Gingerbred kernel အတွက် သုံးတဲ့ drivers တွေက Ice Cream Sandwichkernel အတွက် အလုပ် လုပ်
မှာ မဟုတ် ပါဘူး၊ ဒီ ကိစ္စက လဲ အရေးကြီး ပါတယ်၊ Kernel ရဲ့ အဓီက အလုပ်က Hardwareကို ထိန်းချုပ် ဖို့
တာဝန်ကိုယူထားလို့ပါ၊ kernel ကိုရေးတဲ့ ကုတ်တွေလဲတကယ့်ကိုများလှပါတယ်၊ Kernel ရဲ့ အဓီက တာဝန်
ကတော့ Hardware နဲ့ Software တို့ကြားမှာ နှစ်ဖက်ညွန်ကြားချက် တွေကို နာလည်အောင် လုပ်ကိုင်ပေး
Software တစ်ခုက ဘယ်လို အလုပ် မျိုးကို မဆို Hardware ကို လုပ်စေ ချင်တဲ့ အခါ ကျရင် Hardware ကို
တိုက်ရိုက်အမိန့်မပေးပဲနဲ့ Kernel ကိုညွန်ကြားချက် အရင် လှမ်းပို့ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ အလုပ် ဆိုတာက ဖုန်း
ကလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ် အားလုံးကို ညွန်းပါတယ်၊ ဖုန်း Screen အလင်းရောင် ချိန်တာတို့၊ အသံ အနိမ်း အမြင့်
ချိန်တာတို့၊ Raido ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆို တာတို့၊ ဖုန်း မျက်နှာပြင်မှာ ပုံဆွဲတာတို့စသဖြင့် အလုပ် မှန်
သမျှကို Software က လုပ်လိုတဲ့ အခါ ကျရင် Hardware ကိုတိုက်ရိုက် မခိုင်းပဲ Kernel ကိုလှမ်းခိုင်းလိုက်ပါ
တယ်၊ အဲ့ဒီ့ အခါမှာKernal က တဆင့် Hardware ကို လုပ်မယ့် အလုပ်ကို ညွန်ကြားပါတယ်၊
ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်း မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ က ကင်မရာ (Camera) ရိုက်တဲ့ ခလုပ်မှာ ခလစ် တစ်ချက်နှိပ်
ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ၊ခလုပ်ကိုနှီပ်လိုက်တာနဲ့ကို software က Event တစ်ခုကို နားထောင်လို့ ရမယ်
ရတဲ့ Event ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကို driver ကတဆင့် Kernel ကို ပို့မယ် kernel ကလဲ ရလာတဲ့အချက်နဲ့ပတ်
သက်တဲ့ command ကို Camera hardware ကို လှမ်းပို့မယ်၊ Camera Hardware က ဓါတ်ပုံကို ရိုက်ပေး
မယ် ဒီလို တစ်ခုက Software က Input လုပ်လိုက် တာကို Kernel က ယူပြီး Output တစ်ခု အဖြစ်Hard
ware ကို ပြန်ပေးပါတယ်၊ အကယ်၍ Kernel သာ မရှိခဲ့ရင်တော့ Developers တွေက အလုပ် တစ်ခုစီ အ
တွက် အလွန့်အလွန်များပြားလှတဲ့ machine Code တွေကို ရေးပြီး Hardware ကိုခိုင်းစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Kernel က ကြားခံ ပေးထားတဲ့ အတွက် ApplicationDevelopers တွေ အနေနဲ့ Android System API's
တွေကနေ တစ်ဆင့် Kernel ဆီကိုResquest တွေ အလွယ်တစ်ကူ ပို့နိုင်ပြီး Kernel နဲ့ ချိတ်ဆက် အလုပ်
လုပ်ဖို့သာDevelop လုပ်ရမှာဖြစ်သလို Hardware Developers တွေကလဲ သူတို့ Developလုပ်တဲ့ Hard
ware ကို Kernel နဲ့ ဆက်သွယ် အသုံးပြုနိုင်အောင်သာ Develop လုပ်ပေးစရာ လို့ပါတယ်၊
CWM ဆိုတာ ကတော့ Clock Work Mod ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ CWM ကို Android သုံး ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေ
Recovery လုပ်ဖို့ သုံးပါတယ်၊ ဒီလို CWM သုံးပြီး recoverလုပ်တာ ကိုပဲ CWM recovery လို့ခေါ် ပါတယ်၊
CWM recovery လုပ်ခြင်း အားဖြင့်Stock Recovery နဲ့ မလုပ်နိုင်တဲ့ Data ပြန်လည် သိုလှောင်ခြင်း root
access ရယူခြင်း အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းထဲက data တွေကို Backup လုပ်ခြင်း Custom ROM ထည့်သွင်း အသုံး
ပြုခြင်း Kernel တပ်ဆင်ခြင်း စသဖြင့်အလုပ်တွေ အများကြီးကို လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်၊
Android အခြေခံ အဆင့် ကိုနားမလည်သေးသူတွေအတွက် ClockWorkMod ကိုသုံးပီး Recovery လုပ်
ရင် အခက်အခဲ တွေ့နိုင် သလို CWM recovery က အစွမ်း ကိုလဲ သဘော ပေါက်ဖို့ ခက်ခဲနေ ပါအုံးမယ်၊
Android Devices တွေအားလုံး recovery console ကို ဖုန်းအတွင်းပိုင်း memory ထဲ ထည့်ပြီး ကုမ္မဏီ
တွေက ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါတယ်၊ recover console ကနေBoot တက်နိုင်ပါတယ်၊ အကယ်၍ မလိုလား
အပ်တဲ့ ပြသနာတွေတက်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Factory Reset သုံးပြီး Recover လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါ
မှ မဟုတ် zip ဖိုင်နဲ့ လာတဲ့ official ROM ကို Update လုပ်နိုင် ပါတယ်၊ ဒီလို အချက် လောက် သာလျှင်
လုပ်နိုင်တာပါ Custom Recovery ကတော့ သူမတူတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် Custom Recovery
ကတော့ Stock Recovery လို မဟုတ်ပဲ Stock Recovery လုပ်နိုင် သမျှကို လုပ်နိုင် တဲ့ အပြင် ကိုယ်ပိုင်
Android ကို စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ် နိုင်အောင် အဆင့်မြင့်တဲ့ Options တွေ ပါလာပါတယ်၊ Custom Rec
overy ကို သုံးရင် တရားဝင်ကော တရားမ၀င် ROMs တွေကိုပါ Install လုပ်နိုင်ပါတယ်၊
အခြား Application Updateလုပ်ခြင်း Themes ပြောင်းခြင်း Kernel ပြောင်းလဲခြင်း Zip ဖိုင်အသုံးပြုခြင်း
User Data အပါအ၀င် ဖုန်း Partition တွေအားလုံးကို ဖြတ်နိုင်ခြင်း SD cards Partition ခွဲခြင်း Dalvik
Cache များဖြတ်ပစ်ခြင်း Permission များပြောင်းလဲခြင်း resotre နဲ့ Backup မှာစိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်း
တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း နဲ့ အခြား အခြား သော အလုပ်တွေ အများကြီးကို စိတ်ကြိုက် လုပ်နိုင်ပါတယ်၊
ClockWorkMod recovery ကို Koushik Dutta က Develop လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ AndroidROM Manager
ကို Develop လုပ်တဲ့သူပါပဲ၊ သူ့ရဲ့ Hacking away at Androiddevices ဆိုတဲ့ Blog နဲ့ Twitter မှာ သူ့
ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၊Firmware နဲ့ ပက်သက်သမျှFirmware ဆိုတာက ROM (read only memory)
ထဲကိုထည့်ရေးထားတဲ့ Softwareprogram ကိုဆိုလိုပါတယ်၊
Window computer တွေမှာ သုံးတဲ့ window7 install လုပ်သ လိုပါပဲ၊ ဖုန်း အတွက် Firmware Install
လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ Froyo, Gingerbread, HoneyCamb, ICS, Jelly Bean,Kitkat တို့လို Android
Version တွေ ကို Phone မှာ Install လုပ်ခြင်း ပါပဲ၊ ဖုန်းတိုင်းမှာ မတူညီ တဲ့ Firmware နဲ့ installation
Tool တွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ကြိုက်တဲ့ ဖုန်းမှာ ကြိုက်တဲ့ firmware ကို သုံးနိုင် မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊
ROM ဆိုတာက မူရင်း အဓိပါယ် Read-Only-Memory ကို ဆိုလိုပါတယ်၊ ဒီတော့ read only ဖတ်လို့ပဲရ
မယ် ရေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့၊ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ROM ထဲက Firmware ကို Updateလုပ်
နိုင်မှာလဲလို့ တွေးစရာပါ၊ သဘောတရား အရ တော့ ROM ထဲမှာ Firmware ရှိတယ်ပေါ့ ၊ နောက်ပိုင်းမှာ
တော့ Developer တွေက ROM ရဲ့ အပြင်မှာ Firmware ကိုထည့်ရေး ကုန်ကြပါတယ်၊ ဖုန်းရဲ့ Firmware
ကို ROM လို့လဲခေါ်တယ်၊ အကြောင်းကတော့ သီအိုသီ သဘောမှာ Firmware က ROM ထဲမှာရှိတယ်၊
ROM ဆိုတာ ReadOnly Menory, ရှေ့က ထုတ် ခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေ မှာတော့ Firmware က ROM ထဲမှာရှိ
တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ယနေ့ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းတွေ မှာတော့Firmware ကို ROM မထည့်
တော့ပါဘူး၊ Firmware ကို ဖုန်း ရဲ့ internal flashmeonry ထဲမှာ ထည့် ထား တယ်၊၊ internal flash
meonry က Read Only မဟုတ်ဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် firmware အသစ် တစ်ခုကို flash လုပ်လို့ ရတာပေါ့၊
Flashing လုပ် တယ် ဆိုတာက Eloctronic Device ဖြစ်တဲ့ Phone ထဲကို firmware ထည့်သွင်း တာကို
ဆိုလို ပါတယ်၊ Flashing လုပ်ခြင်းက ROM ထဲမှာ ရှိတဲ့ Data တွေကို ပြန်ရေးခြင်းပါပဲ၊ Android ဖုန်းမှာ
Custom ROMs ကို Stock ROMs အစား Flashing လုပ်ပြီးတော့ ဖုန်းထုတ်တဲ့ကုမ္မဏီကထည့်သွင်းပေး
လိုက်တဲ့ Functions တွေကို ပြောင်းလဲ ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Unlimited ၀င်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်၊
Android System ရဲ့ Hardware Layer အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Linux Kernel ကိုလိုသလို ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်မယ့်
အခွင့်အရေးရချင်လို့ Root accessလုပ်ကြပါတယ်၊ ဒီအခွင့်အရေးရယူနိုင်ခြင်းကိုပဲ Root Access ရတယ်
လို့ခေါ်ပါတယ် Root Access ရသွားရင် Android File System ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ် Android
File System ထဲမှာ အဓိကပါဝင်တဲ့အလွှာ (Partitions) ၆ ခုကို လိုသလိုအသုံးချနိုင်ရင် Booting နဲ့ပတ်
သက်တဲ့Process တွေ အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်သလို File System ထဲက တန်ဖိုးတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်မှူတွေကို
လဲ လိုသလို ပြုပြင်နိုင်ပါပြီ၊ ဒါတင် မကပါဘူး ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက် SSH (Secure Share protocol)
(သို့) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
(သို့) DNS(Domain Name Server) နဲ့ Proxy Servers တွေကို လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ၊
Android System ရဲ့လုပ်ဆောင်မူတွေထဲက ရပ်ချင်သမျှ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလဲ ရပ်ထားနိုင်တဲ့အပြင်
Arbitrarycommands တွေလဲ အသုံးပြုနိုင် သွားပါတယ်၊ အခြား အခြား အခြား သော အချက်တွေအများ
အများကြီး ကိုလဲ လုပ်နိုင် ပါသေးတယ်၊ ဒီ အချက်တွေက Root လုပ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ၊
ဒါကိုပဲ Rooting လုပ်တယ်လဲခေါ်ပါတယ် ထုတ်လုပ်သူ တွေက သူတို့ရဲ့ Device တွေကို ရောင်းချတဲ့အခါ
Softwarerestrictions တွေပါလာပါတယ်၊ ဒီလို Software Restrictions တွေ ပါလာရတဲ့ အကြောင်း အ
မျိုးမျိုး ရှိပါတယ်၊ တစ်ချို့ကုမ္မဏီတွေကတော့ သူတို့ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုတဲ့သူတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ဆိုပြီး
Restrictions ထည့်ပါတယ်၊ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် ကန့်သက်ချက်တွေ ပါဝင်နေခြင်းဟာ
Androidဖုန်း (သို့) Tablet ကို သုံးတဲ့သူ လိုအပ်တဲ့ ပုံစံ အတိုင်းပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခါ မျိုး (သို့) အ
ဆင့်မြင့်တဲ့ ပြင်ဆင်မှူပြုလုပ်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ကာဆီး နေတတ်ပါတယ်၊ ဒီလို အကာ အဆီးကို
ကျော်ဖြတ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် Root accessရဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်၊
Rooting လုပ်ခြင်းက Android သုံး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေက ကန့်သတ်ထားတဲ့ ကန့်သက်ချက်
တွေကို ချိုးဖြတ်ပြီး software ကို အကန့်အသတ် မရှိ အသုံးပြုခြင်း ပါပဲ၊ ဒီလို Rooting လုပ်ခြင်း အားဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ကိုကန့်သက်ထားတဲ့ Android ပစ္စည်း ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ ရေးချင်တာရေးနိုင်သလိုပြုပြင်လို
Stock ROM နဲ့ Custom ROM ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိမယ်၊ Stock ROM က ဖုန်း ၀ယ် တုန်း က ပါလာတဲ့ Phone
Operation System. Stock ROM မှာ Software Restriction တွေ ထည့် သွင်း ထားတဲ့ အ တွက် စိတ်
ကြိုက် အသုံး ပြု ခွင့် မရတဲ့ Operation System ဖြစ်နေ ပါ တယ်၊ Custom ROM ဆို တာ ကတော့ OS
Version တစ်ခု ပါပဲ၊ Custom ROM ထဲမှာလဲ Stock ROM တွေ လိုပဲ Android Device တစ်ခုလုံးကို အ
လုပ် လုပ်စေ တဲ့ Kernel ပါတယ်၊ System Applications တွေ ပါမယ်၊ Services တွေ ပါမယ်၊ တစ်ခုပဲ ကွဲ
သွား တာက စိတ်ကြိုက် တည်ဆောက် ထားတဲ့ ROM ဖြစ်ခြင်းနဲ့ Software Restriction တွေ မပါခြင်းပါပဲ၊
ဒီတော့ Custom ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကဘာကိုရည်ညွန်းလဲ၊ Android က Open Source ဖြစ်တဲ့ အတွက်
Developers တွေက Stock ROMS တွေ အခမဲ့ ယူလို့ ရတယ်၊ ပီးရင် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်လို့ ရတယ် ဖျက်ပစ်
လိုရာ ဖြတ်ထုတ်နိုင်တယ်၊ ထပ်ထည့်လိုတာ ထပ်ထည့်နိုင်တယ်၊
အရည် အချင်း ရှိရင် ရှိသလောက် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး စိတ်ကြိုက် ROM ကို တည်ဆောက်ယူနိုင်
တယ်၊ ဒီလို စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ROM ကိုပဲ Custom ROM လို့ခေါ်တာပါ၊ADB ဆိုတာဘာလဲ
ADB ရဲ့ မူရင်းစာလုံးကတော့ Android Debug Bridge ပါ၊
သူ့ နာမည်အတိုင်းပါပဲ သူက ဖုန်းကို ပြုပြင်ဖို့ အတွက် ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖုန်းကြား ချိတ်ဆက် နိုင်တဲ့ တံတားတစ်
စင်းပါ၊ Android Phone က Linux Kernel ကို အခြေခံ ထားပါ တယ်၊ ဒီတော့ computer adb server ကို
အသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူတာကနေ ဖုန်း ရဲ့ adb Clientကို Linux commands တွေလှမ်းပို့နိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်ပြီး
commands တွေကို အလုပ် လုပ်စေနိုင်ပါတယ်၊ ဖုန်းအလုပ် လုပ်ပုံတွေ မမှန်တော့တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဒီနည်းက
တော့ အမှားရှာပြီး ပြင်ဆင်ဖို့ တကယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့နည်းပါ၊
ဒီ နည်း အတိုင်း ADB Server ဖြစ်တဲ့ Computer ကနေ ADB Client ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းကို Linux Commands
တွေပို့ပြီး အလုပ်မလုပ်ဖူးသေးရင်တော့ မိတ်ဆွေ ADB ရဲ့ အသုံးဝင်မှူကို ခံစားဖူးအုံးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး၊
Baseband ဆိုတာ ကတော့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ Raido ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ ဖုန်းVersion နဲ့ ထုတ် လုပ်တဲ့
ကုမ္မဏီ အလိုက် Raido Version တွေလဲ ကွာပါတယ်၊
Raido File တွေကို Recovery tools တွေကနေ Flash လုပ်နိုင်သလို ADB/ODIN တို့ကလဲ Flash လုပ်နိုင်
ပါတယ်၊ Raido (သို့) Modem နဲ့ ROM Version တို့ ကိုက်ညီမှု မရှိရင် တော့ MMS, 3G data, VM နဲ့ Net
work ပြသနာ တက်နိုင် ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အသုံးပြု နေတဲ့ ROM နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Radio (သို့) Modem ကို
ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လိုသလို ဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ network နဲ့ bandwidth တို့ကိုလဲ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊
Raido Firmware က Network ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် low-level functionsတွေကိုသုံးပီး Wi
-Fi နဲ့ GPS တို့ ချိတ် ဆက် အသုံးပြု နိုင်စေ ပါတယ်၊ အကယ်၍ ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ပြသနာမျိုး
Android Device မှာတွေ့ကြုံနေရပီဆိုရင်တော့ Radio Firmware ကို Update လုပ်ဖို့လိုပါပြီ၊ Radio Firm
ware ကို Update လုပ်ခြင်းက Range နဲ့ လုပ်ဆောင် မှုတွေကို ပိုမို ကောင်းမွန်လာ မှာ ဖြစ်သလို Bettery
အသုံးပြုမှု ကိုလဲရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဖုန်းထဲမှာ Baseband Radio Processor Chipsets တွေပါဝင်ပါတယ်၊
ဒီ Chipsetsတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် Software မျိုးစုံကိုလဲ ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္မဏီတွေက Develop လုပ်
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Thursday, October 02, 2014 1 comment:
Android နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံး သိသင့် သမျှ
Android ကို စတင် လေ့လာဖို့ ကျိုးစား နေသူတွေ အနေနဲ့ အများပြော နေကြတဲ့ Bootloader, Firm
ware, ADB, Stock ROMs, Custom ROMs, OS Kernel, ClockworkMod, Flashing, Rooting,
Baseband စသဖြင့် စာလုံး အထူး အဆန်း တွေချည်း တွေ့ရလို့ လေ့လာ ချင်စိတ် ကုန်သွား တတ်သ
လို တစ်လုံး စီနဲ့ သူတို့ရဲ့ သီးသန့် အလုပ် လုပ် ပုံကို အတိ အကျ မသိရင် နာမည်သာ ခေါ်နေပေမယ့်
အနှစ် သာရ မဲ့နေ တတ်ပါတယ်၊ တကယ် လေ့လာလို သူတွေ အနေနဲ့ လဲ တစ်ခုစီရဲ့ အဓီပါယ် နဲ့ အ
သုံး ၀င်ပုံ အသေးစိတ် အလုပ် လုပ်ပုံ တို့ကို သေချာ သိကို သိထား ရပါမယ်။
ဒီပို့စ်မှာ အထက်က စာလုံးတွေ အကြောင်း ရှင်းသွား ပေးပါမယ်၊ တကယ် ပညာရှင် အဆင့် တက်
လှမ်းချင် သူတွေ အတွက် Open Source ဖြစ်တဲ့ Android က မည်သူ မဆို ဒေါင်း ယူနိုင် ပြီး ကြိုက်
သလို ဖြတ်နိုင် ပြင်နိုင် ပါတယ်၊ စိတ်ကြိုက် ပြောင်းနိုင် ပြီး မိမိနဲ့ အသင့်တော် ဆုံး ဖြစ်တဲ့ System
တစ်ခု ဖြစ်သွားတဲ့ အထိ ပြုပြင် ယူလို့ ရပါတယ်။
Bootloader ဆိုတာက Operation System မစ တင်ခင် အလုပ် လုပ်တဲ့ Code အစိတ် အပိုင်းလေး
ကို ခေါ် ပါတယ်၊ Bootloader ထဲမှာ OS kernal ကို စတင် အလုပ် လုပ်အောင် ခေါ်မယ် ညွန်ကြား
ချက်တွေ ပါ ပါတယ်၊ Bootloader က Internal Memory ထဲမှာ ရှိတဲ့ Paratition တွေအားလုံးက ရဲ့
ပထမ ဆုံး Partition မှာ တည်ရှိ မှာ ဖြစ်ပြီး အခြား Partitions တွေ အားလုံး ကို သွားမယ့် Check
Power စဖွင့် တာနဲ့ ROM ထဲမှာ ရှိတဲ့ Boot ROM Code က စပြီး အလုပ် လုပ်ပါတယ်၊ ပြီးရင်
Bootloader လို့ခေါ်တဲ့ Boot Strap Firmware ကို နိုးမယ်၊ Boot Strap Firmware ထဲမှာ MBR and
GRUB/LILO တို့ ပါဝင်တယ်၊ Bootloader အလုပ် စပြီ ဆိုတာနဲ့ init.S ဖိုင် စအလုပ် လုပ်တယ် ၊
အရင် ဆုံး BSS segment ကို0တန်ဖိုး ရောက်သွားအောင် ရှင်းတယ်၊ ပြီးရင် main.c ဖိုင်ကို စခေါ်
မယ်၊ main.c ဖိုင် စအလုပ်လုပ်တာနဲ့ hardware အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ clocks, board, keypad,
console တို့ကို စတင်စေမယ်၊ ပြီးရင် Linux Tags ကို ဖန်တီးပြီး Linux Kernel image ကို Memory
Bootloader က Phone မှာ ပါဝင်တဲ့ အခြား မည်သည့် software မဆိုရဲ့ အဦးဆုံး စတင်တဲ့ အတွက်
မှန်ကန်တဲ့ processor ကို အသုံးပြုဖို့ အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ် Android OS က Open Source
ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖုန်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ တွေက သူတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်း Hardware နဲ့ ကိုက်
ညီတဲ့ Bootloader version ကို Develop လုပ်ထား ကြပါတယ်၊ Android ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Boot
loader တွေကို အမြဲတမ်း Locked ချ ထားပါတယ်၊ ဒီလို လုပ်ထား တာကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မ
ဏီတွေကို သူတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်းကို သူတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ OS version နဲ့ ပဲတွဲသုံးစေ ချင်လို့ပါ၊
Bootloader ကို Locked လုပ်ထားရင် Custom ROM install လုပ်လို့ မရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် Custom
ROM Install လုပ်လိုရင် Bootloader ကို အရင် Unlock လုပ် ရပါတယ်။
Kernel ဆိုတာ ဘာလဲ
Kernel ဆိုတာက Android တစ်ခုထဲ မှာသာလျှင် ရှိတာ မဟုတ်ပဲ IOS,MacOS,Window,Black
Berry's QNX တို့မှာလဲ ရှိပါတယ်၊ High Level Operation Systems အားလုံးမှာ Kernel တစ်ခု
တော့ ပါဝင် ပါတယ်၊
ခု ပြော မှာက Android အကြောင်း ဆိုတော့ Linux Kernel ကိုပဲ ဦးတည်ပြီး ပြောသွား ပါမယ်၊
Android သုံးသမျှ ပစ္စည်းတွေက Linux Kernel ကိုသုံးကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Linux Operation
System က သုံးတဲ့ Kernel နဲ့တော့ တထပ်တည်း မတူပါဘူး၊ Android Kernel မှာ Android အ
တွက် သီးသန့် Build-in code တွေ ပါနေ ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့်ပဲ Developers တွေနဲ့ hackers တွေ
အတွက် Android Versions အသစ် တွေကို Android ဖုန်း အဟောင်း တွေမှာ ထည့်သွင်းပြီး
အားလုံး အဆင်ပြေပြေ အလုပ် ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ အတော့ကို စောင့်ရပါတယ်၊
Gingerbred kernel အတွက် သုံးတဲ့ drivers တွေက Ice Cream Sandwich kernel အတွက် အ
လုပ် လုပ်မှာ မဟုတ် ပါဘူး၊ ဒီကစ္စက လဲ အရေးကြီး ပါတယ်၊ Kernel ရဲ့ အဓီက အလုပ်က Hard
ware ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တာဝန်ကို ယူထား လို့ပါ၊ kernel ကိုရေးတဲ့ ကုတ်တွေလဲတကယ့်ကို များလှ
ပါတယ်၊ Kernel ရဲ့ အဓီက တာဝန် ကတော့ Hardware နဲ့ Software တို့ ကြားမှာ နှစ်ဖက် ညွန်
ကြားချက်တွေကို နာလည်အောင် လုပ်ကိုင်ပေးဖို့ပါပဲ၊
Software တစ်ခုက ဘယ်လို အလုပ်မျိုး ကိုမဆို Hardware ကို လုပ်စေ ချင်တဲ့ အခါ ကျရင် Hard
ware ကို တိုက်ရိုက် အမိန့် မပေးပဲနဲ့ Kernel ကို ညွန်ကြားချက် အရင် လှမ်းပို့ ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ
အလုပ် ဆိုတာက ဖုန်းကလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်အားလုံးကို ညွန်းပါတယ်၊ ဖုန်း Screen အလင်းရောင်
ချိန်တာတို့ အသံ အနိမ့် အမြင့် ချိန်တာတို့၊ Raido ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုတာတို့၊ ဖုန်း မျက်
နှာပြင်မှာ ပုံဆွဲတာတို့ စသဖြင့် အလုပ်မှန်သမျှကို Software က လုပ်လိုတဲ့အခါကျရင် Hardware
ကိုတိုက်ရိုက် မခိုင်းပဲ Kernel ကိုလှမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့ အခါမှာ Kernal က တဆင့် Hard
ware ကို လုပ်မယ့် အလုပ်ကို ညွန်ကြား ပါတယ်၊ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်း မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ က
ကင်မရာ (Camera) ရိုက်တဲ့ ခလုပ် မှာ ကလစ် တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ၊ ခလုပ်
ကိုနှီပ်လိုက် တာနဲ့ကို software က Event တစ်ခုကို နားထောင်လို့ရမယ် ရတဲ့ Event ဖြစ်ပေါ်တဲ့
နေရာကို driver က တဆင့် Kernel ကို ပို့မယ်၊ kernel ကလဲ ရလာ တဲ့ အချက်နဲ့ ပတ် သက် တဲ့
command ကို Camera hardware ကိုလှမ်းပို့မယ် Camera Hardware က ဓါတ်ပုံကိုရိုက်ပေးမယ်
ဒီလို Software က Input လုပ်လိုက် တာကို Kernel က ယူပြီး Output တစ်ခု အဖြစ် Hardware
အကယ်၍ Kernel သာ မရှိခဲ့ ရင်တော့ Developers တွေက အလုပ် တစ်ခုစီ အတွက် အလွန့် အ
လွန်များပြား လှတဲ့ machine Code တွေကို ရေးပြီး Hardware ကို ခိုင်းစေ ရမှာဖြစ် ပါတယ်၊ Ker
nel က ကြားခံ ပေးထားတဲ့ အတွက် Application Developers တွေ အနေနဲ့ Android System
API's တွေ ကနေ တစ်ဆင့် Kernel ဆီကိုResquest တွေအလွယ်တစ်ကူပို့နိုင်ပီး Kernel နဲ့ ချိတ်
ဆက် အလုပ် လုပ်ဖို့သာ Develop လုပ်ရမှာ ဖြစ်သလို Hardware Developers တွေကလဲ သူတို့
Develop လုပ်တဲ့ Hardware ကို Kernel နဲ့ ဆက်သွယ် အသုံးပြု နိုင်အောင် သာ Develop လုပ်
CWM ဆိုတာကတော့ ClockWorkMod ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ CWM ကို Android သုံး ဖုန်းနဲ့ Tablet
တွေ Recovery လုပ်ဖို့ သုံးပါတယ်၊ ဒီလို CWM သုံးပြီး recover လုပ်တာ ကိုပဲ CWM recovery လို့
ခေါ်ပါတယ်၊ CWM recovery လုပ်ခြင်း အားဖြင့် Stock Recovery နဲ့ မလုပ်နိုင်တဲ့ Data ပြန်လည်
သိုလှောင်ခြင်း root access ရယူခြင်း အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းထဲက data တွေကို Backup လုပ်ခြင်း Custom
ROM ထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်း Kernel တပ်ဆင်ခြင်း စသဖြင့် အလုပ်တွေ အများကြီးကို လုပ်သွား
နိုင်ပါတယ်၊ Android အခြေခံ အဆင့် ကို နားမလည် သေးသူတွေ အတွက် ClockWorkMod ကို
သုံးပြီး Recovery လုပ်ရင် အခက်အခဲ တွေ့နိုင်သလို CWM recovery က အစွမ်းကိုလဲ သဘော
Android Devices တွေ အားလုံး recovery console ကို ဖုန်း အတွင်းပိုင်း memory ထဲ ထည်ပြီး
ကုမ္မဏီတွေက ထုတ်လုပ် ရောင်းချပါတယ်၊ recover console ကနေ Boot တက်နိုင်ပါတယ်၊ အ
ကယ်၍ မလိုလား အပ်တဲ့ ပြသနာတွေ တက်လာပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Factory Reset သုံးပြီး
Recover လုပ်နိုင် ပါတယ်၊ ဒါမှ မဟုတ် zip ဖိုင်နဲ့ လာတဲ့ official ROM ကို Update လုပ်နိုင် ပါ
တယ်၊ ဒီလို အချက်လောက်သာလျှင်လုပ်နိုင်တာပါ Custom Recovery ကတော့ သူမတူတဲ့ အ
လုပ်မျိုးကို လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ Custom Recovery ကတော့ Stock Recovery လို မဟုတ်ပဲ Stock
Recovery လုပ်နိုင် သမျှကို လုပ်နိုင်တဲ့ အပြင် ကိုယ်ပိုင် Android ကို စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ် နိုင်
အောင် အဆင့် မြင့်တဲ့ Options တွေ ပါလာ ပါတယ်၊ Custom Recovery ကိုသုံးရင် တရားဝင်
ကော တရားမ၀င် ROMs တွေကိုပါ Install လုပ်နိုင်ပါတယ် အခြား Application Update လုပ်
ခြင်း Themes ပြောင်းခြင်း Kernel ပြောင်းလဲခြင်း Zip ဖိုင် အသုံးပြုခြင်း User Data အပါ အ၀င်
ဖုန်း Partition တွေ အားလုံးကို ဖြတ်နိုင်ခြင်း SD cards Partition ခွဲခြင်း Dalvik Cache များ
ဖြတ် ပစ်ခြင်း Permission များပြောင်းလဲခင်း resotre နဲ့ Backup မှာ စိတ်ကြိုက် အစိတ်အပိုင်း
တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း နဲ့ အခြား အခြား သော အလုပ်တွေ အများကြီးကို စိတ်ကြိုက် လုပ်
ClockWorkMod recovery ကို Koushik Dutta က Develop လုပ်ခဲ့ ပါတယ်၊ Android ROM
Manager ကို Develop လုပ်တဲ့သူပါပဲ၊ သူ့ရဲ့ Hacking away at Android devices ဆိုတဲ့ Blog
နဲ့ Twitter မှာ သူ့ကို ရှာတွေ့နိုင် ပါတယ်၊
Firmware နဲ့ ပက်သက်သမျှ
Firmware ဆိုတာက ROM (read only memory) ထဲကို ထည့်ရေး ထားတဲ့ Software program
ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ Window computer တွေမှာ သုံးတဲ့ window7 install လုပ် သလိုပါပဲ၊ ဖုန်း
အတွက် Firmware Install လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ Froyo, Gingerbread, HoneyCamb, ICS,
Jelly Bean, Kitkat တို့လို Android Version တွေကို Phone မှာ Install လုပ်ခြင်းပါပဲ၊ ဖုန်းတိုင်း
မှာ မတူညီတဲ့ Firmware နဲ့ installation Tool တွေရှိပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ကြိုက်တဲ့ဖုန်းမှာ ကြိုက်
တဲ့ firmware ကို သုံးနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊
တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ROM ဆိုတာက မူရင်း အဓိပါယ် Read-Only-Memory ကို ဆိုလို ပါတယ်၊
ဒီတော့ read only ဖတ်လို့ပဲ ရမယ် ရေးလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့၊ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
ROM ထဲက Firmware ကို Update လုပ်နိုင်မှာ လဲလို့ တွေးစရာပါ၊ သဘော တရားအရ တော့
ROM ထဲမှာ Firmware ရှိတယ်ပေါ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Developer တွေက ROM ရဲ့ အပြင်မှာ
Firmware ကို ထည့်ရေး ကုန်ကြ ပါတယ်၊ ဖုန်းရဲ့ Firmware ကို ROM လို့လဲ ခေါ်တယ်၊
အကြောင်း ကတော့ သီအိုသီ သဘော မှာ Firmware က ROM ထဲမှာ ရှိတယ်၊ ROM ဆိုတာ
Read Only Menory, ရှေ့က ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Firmware က ROM ထဲမှာရှိ တယ်
ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ယနေ့ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Firmware ကို ROM မ
ထည့်တော့ပါဘူး Firmware ကို ဖုန်းရဲ့ internal flash meonry ထဲမှာထည့်ထားတယ် internal
flash meonry က Read Only မဟုတ်ဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် firmware အသစ် တစ်ခုကို flash လုပ်
Flashing ဆိုတာ ဘာလဲ
Flashing လုပ်တယ် ဆိုတာက Eloctronic Device ဖြစ်တဲ့ Phone ထဲကို firmware ထည့်သွင်း
တာကို ဆိုလိုပါတယ်၊ Flashing လုပ်ခြင်းက ROM ထဲမှာ ရှိတဲ့ Data တွေကို ပြန်ရေးခြင်းပါပဲ၊
Android ဖုန်းမှာ Custom ROMs ကို Stock ROMs အစား Flashing လုပ်ပီးတော့ ဖုန်းထုတ်တဲ့
ကုမ္မဏီက ထည့်သွင်းပေး တဲ့ Functions တွေကို ပြောင်းလဲ ပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ Unlimited
၀င်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင် ပါတယ်။
Rooting ဆိုတာ ဘာလဲ
Android System ရဲ့ Hardware Layer အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Linux Kernel ကို လိုသလို ထိန်းချုပ်လို့ ရ
နိုင်မယ့် အခွင့်အရေး ရချင်လို့ Root access လုပ်ကြ ပါတယ်၊ ဒီ အခွင့်အရေး ရယူနိုင်ခြင်း ကိုပဲ
Root Access ရတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်၊
Root Access ရသွားရင် Android File System ကို စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်၊ Android File
System ထဲမှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့ အလွှာ (Partitions) ၆ ခု ကို လိုသလို အသုံးချနိုင်ရင် Booting
နဲ့ ပက်သက်တဲ့ Process တွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင် သလို File System ထဲက တန်ဖိုးတွေနဲ့
ထိန်းချုပ်မှူ တွေကိုလဲ လိုသလို ပြုပြင်နိုင် ပါပြီ၊ ဒါတင် မကပါဘူး ကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက် SSH
(Secure Share protocol) (သို့) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) (သို့) DNS(Domain Name Server) နဲ့ Proxy Servers တွေကို လဲ အ
သုံးပြုနိုင် ပါပြီ၊ Android System ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တွေထဲက ရပ်ချင် သမျှ လုပ်ဆောင်ချက် တွေ
ကိုလဲ ရပ်ထား နိုင်တဲ့ အပြင် Arbitrary commands တွေလဲ အသုံးပြုနိုင် သွား ပါတယ်၊ အခြား
အခြား အခြား သော အချက်တွေ အများ အများကြီး ကိုလဲ လုပ်နိုင် ပါသေးတယ် ဒီအချက်တွေ
က Root လုပ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ၊ ဒါကိုပဲ Rooting လုပ်တယ်လည်း ခေါ်ပါတယ်။
ထုတ်လုပ်သူတွေက သူတို့ Device တွေကို ရောင်းချတဲ့အခါ Software restrictions တွေ ပါလာ
ပါတယ်၊ ဒီလို Software Restrictions တွေ ပါလာ ရတဲ့ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်၊ တစ်ချို့
ကုမ္မဏီတွေ က သူတို့ ပစ္စည်းကို အသုံးပြုတဲ့ သူတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ဆိုပြီး Restrictions
ထည့် ပါတယ်၊ ဘယ်လို အကြောင်း ကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် ကန့်သတ် ချက်တွေ ပါဝင် နေခြင်းဟာ
Android ဖုန်း (သို့) Tablet ကို သုံးတဲ့သူ လိုအပ်တဲ့ ပုံစံ အတိုင်းပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ မျိုး
(သို့) အဆင့်မြင့်တဲ့ ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်တဲ့ အခါမျိုးမှာ ကာဆီး နေတတ် ပါတယ်၊
ဒီလို အကာ အဆီးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် Root access ရဖို့ ကြိုးစား
Rooting လုပ်ခြင်းက Android သုံး ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေက ကန့်သတ် ထားတဲ့ ကန့်
သတ်ချက် တွေကို ချိုးဖြတ်ပြီး software ကို အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုခြင်း ပါပဲ၊ ဒီလို Rooting
လုပ်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော် တို့ကိုကန့်သတ် ထားတဲ့ Android ပစ္စည်း ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ ရေး
ချင်တာ ရေးနိုင်သလို ပြုပြင်လို သမျှကို ပြုပြင် သွားနိုင် ပါတယ်။
Stock ROM နဲ့ Custom ROM ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိမယ်၊ Stock ROM က ဖုန်းဝယ် တုန်းက ပါလာတဲ့
Phone Operation System. Stock ROM မှာ Software Restriction တွေ ထည့်သွင်း ထားတဲ့ အ
တွက် စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုခွင့် မရတဲ့ Operation System ဖြစ်နေ ပါတယ်၊ Custom ROM ဆိုတာ
ကတော့ OS Version တစ်ခုပါ Custom ROM ထဲမှာလဲ Stock ROM တွေလိုပဲ Android Device
တစ်ခု လုံးကို အလုပ် လုပ်စေတဲ့ Kernel ပါတယ်၊ System Applications တွေပါမယ်၊ Services
တွေပါမယ် တစ်ခုပဲကွဲသွားတာက စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ROM ဖြစ်ခြင်းနဲ့ Software
Restriction တွေ မပါခြင်း ပါပဲ၊ ဒီတော့ Custom ဆိုတဲ့ စကား လုံးက ဘာကို ရည်ညွန်း ပါသလဲ၊
Android က Open Source ဖြစ်တဲ့ အတွက် Developers တွေက Stock ROMS တွေ အခ မဲ့ ယူ
လို့ ရတယ်၊ ပီးရင် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်လို့ ရတယ် ဖျက်ပစ် လိုရာ ဖြတ်ထုတ် နိုင်တယ်၊ ထပ် ထည့်
လိုတာ ထပ်ထည့်နိုင် တယ်၊ အရည် အချင်း ရှိရင် ရှိသလောက် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ပြောင်း လဲပြီး
စိတ်ကြိုက် ROM ကို တည်ဆောက် ယူနိုင်တယ်၊ ဒီလို စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ROM
ကိုပဲ Custom ROM လို့ခေါ်တာပါ၊
ADB ရဲ့ မူရင်း စာလုံး ကတော့ Android Debug Bridge ပါ၊ သူ နာမည် အတိုင်းပါပဲ သူက ဖုန်းကို
ပြုပြင်ဖို့ အတွက် ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖုန်းကြား ချိတ်ဆက် နိုင်တဲ့ တံတား တစ်စင်းပါ၊ Android Phone
က Linux Kernel ကို အခြေခံထားပါတယ်၊ ဒီတော့ computer adb server ကိုအသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူ
တာကနေ ဖုန်း ရဲ့ adb Client ကို Linux commands တွေလှမ်းပို့နိုင်ပါတယ်၊
ဒီလိုလုပ်ပီး commands တွေကို အလုပ် လုပ်စေနိုင် ပါတယ်၊ ဖုန်း အလုပ် လုပ်ပုံတွေ မမှန်တော့
တဲ့ အခါမျိုးမှာ ဒီနည်းက တော့ အမှားရှာပြီး ပြင်ဆင်ဖို့ တကယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့ နည်းပါ၊ ဒီနည်း
အတိုင်း ADB Server ဖြစ်တဲ့ Computer ကနေ ADB Client ဖြစ်တဲ့ ဖုန်းကို Linux Commands
တွေပို့ပြီး အလုပ် မလုပ်ဖူးသေး ရင်တော့ မိတ်ဆွေ ADB ရဲ့ အသုံးဝင် မှူကို ခံစားဖူးအုံး မှာ မ
Baseband ဆိုတာ ကတော့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ Raido ကို ဆိုလို ပါတယ်၊ ဖုန်း Version နဲ့ ထုတ်
လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီအလိုက် Raido Version တွေလည်းကွာပါတယ် Raido File တွေကို Recovery
tools တွေကနေ Flash လုပ်နိုင်သလို ADB/ODIN တို့ကလဲ Flash လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ Raido (သို့)
Modem နဲ့ ROM Version တို့ ကိုက်ညီမှု မရှိရင် တော့ MMS, 3G data, VM နဲ့ Network ပြသ
နာ တက် နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အသုံးပြု နေတဲ့ ROM နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Radio (သို့) Modem ကို
ရွေးချယ် နိုင်ဖို့ လိုသလို ဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီ တဲ့ network နဲ့ bandwidth တို့ကိုလဲ ရွေးချယ် နိုင်ဖို့ လို
Raido Firmware က Network ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ရေး အတွက် low-level functions တွေကို
သုံးပြီး Wi-Fi နဲ့ GPS တို့ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်စေ ပါတယ်၊ အကယ်၍ ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ ပတ်
သက်တဲ့ ပြသနာမျိုး Android Device မှာ တွေ့ကြုံ နေရပြီဆိုရင်တော့ Radio Firmware ကို Up
date လုပ်ဖို့ လိုပါပြီ၊ Radio Firmware ကို Update လုပ်ခြင်းက Range နဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို
ပိုမိုကောင်းမွန်လာ မှာ ဖြစ်သလို Bettery အသုံးပြုမှု ကိုလည်း ရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာ Baseband Radio Processor Chipsets တွေ ပါဝင် ပါတယ်၊ ဒီ Chipsets တွေကို ထိန်း
ချုပ်ဖို့ အတွက် Software မျိုးစုံ ကိုလည်း ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေက Develop လုပ်ကြ
ဒီပိုစ်ကို pdf ဖို်င် အဖြစ်ဒေါင်းလုဒ်ရယူချင်ရင် အောက်ကလင့်မှာ ရယူနိုင်ပါသည်။
ဒီပို့စ်ကို BrighterMyanmar အဖွဲ့ ရေးတာဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ပို့စ် မှာ အမှား ပါနေတာ တွေ့ရင်
ကျေးဇူးပြုပြီး brightermyanmar@gmail.com ကို ကြောင်းကြားပေးပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့
သေချာ ပြန်စီစစ်ပြီး ပြင်ပါ့မယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, January 10, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, နည်းပညာဆောင်းပါး
သင့်ဖုန်း တွေကို ဗားရှင်း မြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ - Upgrade for Android – Go Next ဗားရှင်း အသစ် လေးပါ ဖုန်း firmware, Cpu, Ram စတာ တွေကို ဗားရှင်း မြှင့်ပေး နိုင်လို့ ဘော်ဒါတွေ အသုံး တည့်မယ့် ဆော့ဝဲ ကောင်း လေးပါ အောက်မှာ ဒေါင်းပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။
Upgrade for Android™ Go Next: An essential app to detect your smartphone/tablet specifications and check if you can upgrade or update it toanew version of Android™ OS firmware.
★★ More than6MILLION downloads!! ★★
This application is capable test your device and determine if it is capable to run the most recent android firmware, and you can use it to test your system for each android version as far as CPU frequency, RAM and Internal Memory.
It'safast, simple and well designed app to guide you to an android firmware upgrade.
★ Android™ Lollipop, version 5.0;
★ Android™ Kitkat, version 4.4;
★ Android™ JellyBean, version 4.2;
★ Android™ IceCream, version 4.0;
★ Android™ Honeycomb, version 3.0;
★ Android™ Gingerbread, version 2.3;
★ Android™ Froyo, version 2.2;
★ Android™ Eclair, version 2.1;
★ Android™ Donut, version 1.6;
★ Android™ Cupcake, version 1.5;
Also useful to detect your current android version firmware, detect RAM and Internal Memory available in your device. The ultimate upgrade tool advisor.
Updated : May 6, 2015
Current Version : 1.5.5
အောက်ကလင့်တွေမှာ အဆင်ပြေမဲ့ လင့် တစ်ခုမှ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, May 11, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application
Android ဖုန်း အားလုံးမှာ ဗားရှင်းမြှင့်တင်နည်း
Android ချစ် ပရိတ်သတ် ကြီးများ အတွက် အထူး ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပိုစ့်လေးကို တင်ပေး လိုက်ခြင်း
ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား ...
ခေါင်းစဉ်လေး မြင်တာနဲ့ ဘာဆို တာကို သဘောပေါက်မှာပါ သိပြီးသား ညီအကိုတွေ ကတော့
ကျော်သွား လိုက်ကြပါ လေ့လာခါစ ညီအကိုတွေနဲ့ စနစ်ဟောင်းကို တွန်းလှန်ပြီး စနစ်သစ် စ
တိုင် အသစ်လေးနဲ့ လန်းချင် သူများကတော့ လုံးဝ သိထားရမယ့် Android Device ဆိုင်ရာ နည်း
ဘာကြောင့် ဗားရှင်းမြှင့်ရ သလဲလို့ ဆိုတော့ အသစ် အသစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ Android Operating
System တွေရဲ့ Features အသစ်တွေ၊ function တွေ၊ performance ပိုမို ကောင်းလာအောင် ဆိုပြီး
ဗားရှင်း အဟောင်း ကနေ အသစ်ကိုတင်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗားရှင်း အဟောင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကတော့ အထူးပြော နေစရာ မလို လောက် တော့ဖူးလို့
ထင်ပါတယ် အသုံးပြုနေရင်း ကနေ ထုပစ် ချင်စိတ်ပေါက်လောက်အောင် လေးလန် နေပြီး
ဘာဆို ဘာမှ ထူးခြားမှု ကောင်းမွန်ခြင်းထပ်တိုး လာတာမျိုး လည်း မရှိပဲ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့
ပိုဆိုး လာခြင်းကတော့ ဗားရှင်း အဟောင်းပေါ့ဗျာ
ကဲ အလန်းဆုံး ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းတွေရဲ့ Features အသစ်တွေ၊ function တွေ၊ performance ကောင်းကောင်းနဲ့ အသုံးပြု ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Android ဖုန်း tablet အားလုံး
မှာ ဖုန်း၊ tablet မှ တိုက်ရိုက် ဗားရှင်း မြှင့်တင်နည်းနဲ့ ကွန်ပျူ တာမှ တင်နည်းများကို အောက်မှာ
Android Version 2.3 မှ 4.3 အထိ ဖုန်းတွေ အတွက် နောက်ဆုံး ဗားရှင်း မြှင့်တင်နည်း
၁။ ပထမဆုံး Wifi အင်တာနက်ကို ဖုန်းမှာ ချိတ်ဆက်ပါ။
၂။ ပြီးရင် ဖုန်းရဲ့ Setting ဆိုကိုနှိပ်ပါ။
၃။ ဖုန်း Setting ထဲမှာ Privacy setting ဆိုတာကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
၄။ ပေါ်လာတဲ့ Privacy setting တွေရဲ့ အောက်မှ Back up my data ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ပေး
၅။ About Phone ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပါ
၆။ Software ဆိုတာကို ထပ်နှိပ် လိုက်ပါ
၇။ Update ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ
၈။ Update ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ် ကျနော်
အနီရောင်လေးနဲ့ ၀ိုင်းပြ ထားတဲ့ Scheduled software updates နေရာမှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး
Install ဆိုတာကိုသာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၉။ တကယ်လို့ အောက်က ပုံအတိုင်း ပြနေ ခဲ့ရင်တော့ သင့်ဖုန်း အတွက် လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ ဗား
ရှင်းသည် နောက်ဆုံး ဗားရှင်း ဖြစ်နေတာပါ၊ အဲဒီလိုသာ ပြနေ ခဲ့ရင်တော့ ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်
ရဲနေလိုက်ပါ၊ သင့်ဖုန်း အတွက် ထုပ်လုပ်သူနဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူတို့ရဲ့ အပေါ်မှာသာ မူတည်
တာ ဖြစ်လို့ ဒီနေ့ တွပ်ပီ ကံမကောင်း ဘူးလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ။
၁၀။ ဖုန်း Tablet ကနေ တိုက်ရိုက် လုပ်ယူတာ ဖြစ်လို့ Internet Connection အခြေ အနေ အရ
အနှေး အမြန် ကတော့ ရှိမှာပါ။
အားလုံး အဆင်ပြေ ရင်တော့ ဖုန်းက Reboot ကျပြီး ပြန်တက် လာတဲ့ အခါ မိမိ ဖုန်း အတွက်
သတ်မှတ်ပေး ထားတဲ့ Official ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို သင် ပိုင်ဆိုင်နိုင် ပါပြီ။
(မှတ်ချက် = အထက်ပါ နည်းလမ်းသည် Samsung ဖုန်းကို အခြေ ခံပြီး ရှင်းပြ ထားခြင်းသာ ဖြစ်
ပါတယ် တစ်ခြားသော ဖုန်းတွေရဲ့ System တွေနဲ့ ကွဲပြား ခြားနေရင်လည်း ဒီနည်း အတိုင်း ထပ်
တူ ဆိုတာကို မှတ်ယူ စေချင်ပါတယ်)
4.3 အထက် ဖုန်းများမှ 4.4.2 အထက် ဗားရှင်းသို့ မြှင်တင်နည်း
၁။ နည်းလမ်း ကတော့ အပေါ်က အတိုင်း ဖြစ်သည့်တွက် ပုံတွေကို မပြပေး တော့ပါ၊ စာပဲ ရေး
လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်မှာ Note2ဖုန်းကို ၀ယ်တုန်းက ဗားရှင်း 4.3 ကြီးပါ မကြို က်တော့တာ
နဲ့ Official ကလည်း 4.4.2 ဗားရှင်းကို ပေးနေတော့ အထက်ပါ နည်းလမ်း အတိုင်းပဲ မြှင့်တင်
၂။ ဗားရှင်းမြှင့်ဖို့ရန် အတွက် Settings > More > About Device > Software Updates >
Update ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ မိမိဖုန်း အတွက် Official က သက်ဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို
ထုပ်ပေး ထားပြီးသား ဆိုရင်တော့ တွပ်ပီ ကံကောင်းမှာပေါ့ဗျာ...
Android 4.4.2 Features
Camera Shortcut on Lock-Screen
Album Art on Lock-Screen during Music Playback
NFC tap-to-pay support
Options to set default messaging and launcher apps
Transparent status barv
Improved Ram usage
Smoother Interface Overall
Emoji for Keyboard
နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းကို ကွန်ပျူတာမှ တင်နည်း ဒီတစ်ခါ ဖုန်းက Android Version တွေကို ကွန်ပျူတာမှ တင်ယူ နည်းလေးပါ။ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ ပထမဆုံး Samsung Kies နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို ဒေါင်းလော့ ရယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အင်စတော လုပ်နည်းကိုပါ အောက်က လင့်မှာ ၀င်လေ့လာလိုက်ပါ Samsung Phone & Tablet တွေအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့ Entertainment ဆော့ဝဲ ၂။ Samsung Kes ဆော့ဝဲကို ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော လုပ်ပြီး ရင်တော့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ၃။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ပြီးလို့ Connected ဖြစ်တဲ့ အခါ အောက်က ပုံအတိုင်း ပြနေ ပါ လိမ့်မယ်။ Basic Information ဆိုတာကို တစ်ချက်နှိပ် လိုက်ပါ။ မြင်နေရတဲ့ ပုံအတိုင်းပါပဲ သင့် ဖုန်းအတွက် New firmware is available ပြနေ ခဲ့ရင်တော့ သေချာ သွားပါပြီ။ သင့်အတွက် နောက်ဆုံး ဆိုတာကို Update လုပ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ ပုံအတိုင်း မြင်နေ ရရင်တော့ ဗားရှင်းမြှင့်ရန် အတွက် ကျနော် အပြာလေးနဲ့ ၀ိုင်းပြ ထားတဲ့ Firmware Upgrade button ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ၄။ အောက်က ပုံအတိုင်း ပြနေ ခဲ့ရင်တော့ terms of the agreement ကို ပြောနေတာ ဖြစ်ပါတယ် မြှားနဲ့ ထိုးပြထားတဲ့ I have read all of the above Information ရဲ့နေရာမှ လေးထောင့် ကွက် လေးကို အမှန်ခြစ်ပေး လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Start Upgrade ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။ Start Upgrade ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပြီး ဗားရှင်း စတင် မြှင့်နေ တုန်းမှာ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ် ဆက် ထားတဲ့ USB ကြိုးကို ဖြုတ်မိ တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ အချိန် အနည်းငယ် ကြာအောင် စောင့် ပေးလိုက်ပါ အားလုံးပြီးတာနဲ့ ဖုန်းက သူ့အလိုလို Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်၊ ပြန်တက်လာ တဲ့ အခါမှာတော့သင့် ဖုန်းလေးမှာ Official ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါပြီ။ Android ဖုန်း tablet အားလုံးမှာ Official ရဲ့ Update ဗားရှင်းကို Odin နှင့် မြှင့်တင်နည်း ဒီ တစ်ခါ ကျနော် ပြန်လည် မျှဝေ သွားချင် တာလေး ကတော့ Odin ဆော့ဝဲကို အသုံးပြု ပြီး Official ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာ အလွယ် တကူ Upgrade လုပ်နည်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ပထမဆုံး Samsung Phone Driver ကို အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလော့ ရယူလိုက်ပါ၊ ပြီး ရင် ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။ Samsung USB Drivers များကို ဖုန်းအမျိုးအစားလိုက် ရွေးချယ် ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင်ပါပြီ။ ၂။ Odin ဆော့ဝဲကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလော့ ရယူလိုက်ပါ။
▼ odin.website ▼
၃။ Samsung Firmware များ ကိုတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ မော်ဒယ် အလို Official ဆိုက်မှာ အကောင့် အသစ် တစ်ခုဖွင့်ပြီး စိတ်ကြိုက် ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်မှာ ၀င်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ အကောင့် တစ်ခု ဖွင့်ပြီး Samsung Official ရဲ့ Firmware တွေကို လိုသလောက် ဒေါင်းယူ နိုင် ၄။ ဖုန်းကို ပါဝါ ပိတ်လိုက်ပါ။ အောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ။ ၅။ ဖုန်းကို Download Mode ၀င်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Volume Down Key, Home Button and Power key ကိုတွဲနှိပ်ထားပါ။ အနည်းဆုံး5to 8 မိနစ်လောက် တွဲနှိပ်ပေး လိုက်ပါ။ အောက်က ဘယ်အခြမ်း ပုံအတိုင်း Warning ဆိုပြီး ပြနေပါလိမ့်မယ်။ အသံချဲ့တဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ၊ အဲဒါ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို Download Mode ၀င်သွားပါမယ်။ ၆။ ဒေါင်းလော့ ရယူ ထားတဲ့ Odin ကို Zip ဖိုင်နဲ့ ဆိုရင်တော့ Extract files ဖြင့် ဖြည်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက် လိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ နည်းနည်း ပြောစရာ ရှိပါတယ်။ ကျနော် အနီရောင်လေးနဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ နေရာတွေ ကို သတိထား စေချင်ပါတယ်။ (က) ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက် လိုက်တဲ့ အခါ အပေါ်ဆုံးက ID: COM နေရာမှာ အပြာ ရောင်လေး ပြနေရပါမယ်။ (ခ) ဒုတိယ အနီရောင်လေး အတန်းမှာ ကျနော် အမှန်ခြစ် ပေးထားတာ တွေ့ ပါလိမ့်မယ်၊ တ ကယ်တော့ Odin ကို ဖွင့်လိုက် တာနဲ့ အဲဒီ နှစ်နေရာမှာအမှန်ခြစ်က Auto ခြစ်ထား ပြီးသား ဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်လို့ အမှန်ခြစ်လေးရှိမနေ ခဲ့ရင်တော့ အမှန်ခြစ်ပေး ထားပေးပါ။ (ဂ) တတိယမြောက် အနီရောင်နဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Pit စသည်ဖြင့် သူ့အောက်မှာ လေးခု ပါဝင်ပါ တယ်။ (ဃ) ဖုန်းရဲ့ အမျိုး အစား အလိုက် ဒီနေရာမှာ အနည်းငယ် ကွဲပြားခြားနား ကြပါတယ်၊ မိမိဒေါင်း လော့ ရယူလာတဲ့ Firmware ထဲမှာ တကယ်လို့ သင့်ဖုန်း အမျိုးအစားအရ လေးခုလုံး လိုအပ် တယ် ဆိုရင်တော့ Official ရဲ့ Firmware မှာတင် တစ်ခါတည်း တန်း ပါလာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ (င) တစ်ခုချင်း စီကို ထည့်ဖို့ရန် အတွက် Pit ဆိုရင် Pit ဆိုတဲ့ စာသားကို တစ်ချက်နှိပ် လိုက် ပြီးရင် စောနားက ဒေါင်းလော့ ရယူထားတဲ့ Firmware ဖိုင်ထဲက Pit နာမည်နဲ့ ပါတဲ့ File ကို ရွေးပေးရမှာ ဖြစ်သလို တစ်ခြား Bootloader, PAD, Phone, CSC စသည်ဖြင့် တစ်ခုချင်း စီ ကို ရွေးထည့်ပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (စ) ID: COM နေရာမှာ အပြာလေး ပြတာနဲ့ Message ဆိုတဲ့ နေရာမှာ စာတန်း အနည်းငယ် ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ အောက်က ပုံကို အသေအချာ ကြည့်ပါ၊ အားလုံး အသင့်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် တော့ Start ဆိုတာကို နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။ (ဆ) Start ဆိုတာကို နှိပ်လိုက် ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ USB ကြိုးကို လုံးဝ မဖြုတ်မိ ပါစေနဲ့ ဘာမှ ထပ်လုပ် စရာ မလိုတော့ပါ ဒီအတိုင်း စောင့်ကြည့် နေလိုက်ရုံပါ။ ၇။ အချိန်နည်းငယ် ကြာမှ ပြီးပါမည်။ ID: COM စာတန်းရဲ့ အထက် bottom နေရာမှာ အစိမ်း ရောင် အတန်းလေး စတင်ပြေး နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အရောင်လေး စတင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ မိမိ ဖုန်းမှာ လည်း Firmware ကိုစတင် install လုပ်နေ ပါပြီ။ အချိန် အနည်းငယ်စောင့် နေလိုက်ပါ။ အစိမ်းရောင် တန်းလေး ပြီးသွားတဲ့ အထိ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၈။ အစိမ်းရောင် အတန်းလေး ပြည့်ပြီး တာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း Odin မှာ Pass ဆိုပြီး ပြနေ ပါလိမ့်မယ်။ Message နေရာ မှာလည်း Success ဆိုပြီး စာသားတွေ ပြနေ ပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းမှာ လည်း Firmware ကို install လုပ်ပြီး လို့ Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်း ပါဝါ ပွင့်ပြီး တက် လာတဲ့ အခါမှ Odin မှ Exit ဆို တာကို နှိပ်လိုက်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာချိ တ်ဆက် ထားတဲ့ USB ကြိုးကို အားရ ပါးရသာ ဖြုတ်လိုက် ပါတော့ဗျာ... အထက်ပါ Odin ကို အသုံးပြု ပြီး Firmware တင်နည်းသည် စိတ်ချ ရပါသည်။ လေ့လာ ခါစ ညီအကို တွေကို ကျနော် အထူး မှာချင် တာကတော့ ဒီလိုမျို စတင် ကလစ်တာကို စတင် တော့မယ် ဆိုရင် ကြောက်ကြောက်နဲ့ မလုပ် စေချင်ပါ၊ တကယ်တော့ အခက်ကြီး မဟုတ်ပါ၊ လုပ်ပေါင်း များလာရင် အဆင်ပြေ လာပါ လိမ့်မယ်။ ဒီနည်းနဲ့ တင်ယူမယ် ဆိုရင်တော့ မိမိဖုန်း ကို Official က ချပေးတဲ့ နောက်ဆုံး ဆိုတဲ့ Firmware တွေကို စိတ်ကြိုက် install လုပ်ယူနိုင် မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ခင်ဗျား... အဆင်ပြေပါစေ From : www.zunite.org - By : ဇူးနစ်(နည်းပညာ)
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Phone Application, ဖုန်းနည်းပညာ
သင့် ဖုန်းကို ဗားရှင်း မြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ - Upgrade for Android Tool လေးပါ ဗားရှင်းနိမ့်တဲ့ ဖုန်းတွေကို ဗားရှင်း အမြင့် ပြောင်းပေး နိုင်တဲ့ ကောင်လေးပါ
အသုံးပြု ရတာလည်း လွယ်ကူပြီး သုံးရတာ အဆင်ပြေ စေတဲ့ ဆော့ဝဲ လေးပါ။
Upgrade for Android™ Pro Tool Apps: Essential app to detect your smartphone/tablet specifications and upgrade or update it toanew version of Android™ OS firmware.
This application is capable to test your device and determine if it has the minimum requirements to run the most recent android firmware, and you can use it to test your system for each android version for the required CPU frequency, RAM and Internal Memory. It checks if your device is rooted and updated.
Root checker: It can detect if your device is rooted or unrooted.
It'safast, simple and well designed app to guide you to an android firmware upgrade. Essential to users that want to update their system.
"Best new tool app for this year. Simplicity makes great things." November,2014 - AppReviews Magazine
"It makes something that is hard, very very simple. And that's what we all want, goes to the root of the problem." November,2014 - Appsintally
★ Android™ JellyBean, version 4.1 / 4.2 / 4.3;
Also useful to detect your current android version firmware, detect RAM and Internal Memory available in your device, as well as root check. The ultimate upgrade / update tool advisor.
System detailed info added
Updated : January 4, 2015
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, April 18, 2015 No comments:
Android ဖုန်း Tablet အားလုံးမှာ ဖုန်း Tablet မှ တိုက်ရိုက် ဗားရှင်း မြှင့်တင် နည်းနဲ့ ကွန်ပျူတာမှ တင်နည်းများ
Android ချစ် ပရိတ်သတ် ကြီးများ အတွက် အထူး ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပိုစ့် လေးကို တင်ပေး လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ခေါင်းစဉ်လေး မြင်တာနဲ့ ဘာဆို တာကို သဘော ပေါက် မှာပါ။ သိပြီးသား ညီအကိုတွေ ကတော့ ကျော်သွား လိုက်ကြပါ လေ့လာ ခါစ ညီအကိုတွေနဲ့ စနစ်
ဟောင်းကို တွန်းလှန်ပြီး စနစ်သစ် စတိုင် အသစ်လေးနဲ့ လန်းချင် သူများ ကတော့ လုံးဝ သိထား ရမယ့် Android Device ဆိုင်ရာ နည်း လမ်း ကောင်း လေး
ဘာကြောင့် ဗားရှင်းမြင့် ရသလဲလို့ ဆိုတော့ အသစ် အသစ် ထွက်ရှိ လာတဲ့ Android Operating System တွေရဲ့ Features အသစ်တွေ၊ function တွေ၊
performance ပိုမို ကောင်းလာ အောင် ဆိုပြီး ဗားရှင်း အဟောင်း ကနေ အသစ်ကို တင်ယူခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗားရှင်း အဟောင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကတော့ အထူး ပြောနေ စရာ မလို လောက်တော့ ဖူးလို့ ထင်ပါတယ် အသုံးပြု နေရင်း ကနေ ထုပစ် ချင်စိတ်
ပေါက် လောက် အောင် လေးလန် နေပြီး ဘာဆို ဘာမှ ထူးခြားမှု ကောင်းမွန် ထပ်တိုး လာတာမျိုးလည်း မရှိပဲ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုဆိုး လာခြင်း ကတော့
ကဲ အလန်းဆုံး ဆိုတဲ့ နောက် ဆုံးထွက် ဗားရှင်း aတွရဲ့ Features အသစ်တွေ၊ function တွေ၊ performance ကောင်းကောင်းနဲ့ အသုံးပြု ချင်တယ် ဆိုရင်တော့
Android ဖုန်း tablet အားလုံးမှာ ဖုန်း၊ tablet မှ တိုက်ရိုက် ဗားရှင်း မြှင့်တင်နည်းနဲ့ ကွန်ပျူ တာမှ တင်နည်းများကို အောက်မှာ လေ့လာ ကြည့်လိုက်ပါ။
Android Version 2.3 မှ 4.3 အထိ ဗားရှင်းအနိမ့် ဖုန်းတွေ အတွက် နောက်ဆုံး ဗားရှင်း မြှင်တင်နည်း
၂။ ပထမဆုံး ဖုန်းရဲ့ Setting ဆိုကိုနှိပ်ပါ။
၃။ Setting ထဲမှာ Privacy setting ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။
၄။ ပေါ်လာတဲ့ Privacy setting တွေရဲ့ အောက်မှ Back up my data ဆိုတာကို အမှန်ခြစ် ပေးထား လိုက်ပါ။
၅။ About Phone ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပါ။
၆။ Software ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။
၇။ Update ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
၈။ Update ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော် အနီရောင်လေးနဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Scheduled software updates နေရာမှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Install ဆိုတာ ကိုသာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၉။ တကယ်လို့ အောက်က ပုံအတိုင်း ပြနေခဲ့ ရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာ လက်ရှိ ဗားရှင်းသည် နောက်ဆုံး ဗားရှင်း ဖြစ်နေလို့ပါ၊ အဲဒီလိုသာ ပြနေ ခဲ့ရင်တော့ ရှိတာလေးနဲ့ ရောင့်ရဲနေ လိုက်ပါ၊ သင့်ဖုန်း အတွက် ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးသူတို့ရဲ့ အပေါ်မှာသာ မူတည်တာ ဖြစ်လို့ ဒီနေ့ တွပ်ပီ ကံ မကောင်း ဘူးလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ။
၁၀။ ဖုန်း Tablet ကနေ တိုက်ရိုက် လုပ်ယူတာ ဖြစ်လို့ Internet Connection အခြေအနေ အရ အနှေး အမြန်ကတော့ ရှိမှာပါ။ အားလုံး အဆင်ပြေ ရင်တော့ ဖုန်းက Reboot ကျပြီးပြန်တက် လာတဲ့ အခါ မိမိဖုန်း အတွက် သတ်မှတ်ပေး ထားတဲ့ Official ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို သင်ပိုင်ဆိုင်ပါပြီ။
(မှတ်ချက် = အထက်ပါ နည်းလမ်းသည် Samsung ဖုန်းကို အခြေခံပြီး ရှင်းပြ ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် တစ်ခြားသော ဖုန်းတွေရဲ့ System တွေနဲ့ ကွဲပြား
ခြားနေ ရင်လည်း ဒီနည်း အတိုင်း ထပ်တူ ဆိုတာကို မှတ်ယူစေချင်ပါတယ်)
၁။ နည်းလမ်း ကတော့ အပေါ်က အတိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် ပုံတွေကို မပြပေးတော့ပါ၊ စာပဲ ရေးလိုက် ပါတယ်။ ကျနော်မှာ Note2ဖုန်းကို ၀ယ်တုန်းက ဗားရှင်း 4.3 ကြီးပါ။ မကြိုက် တော့တာနဲ့ Official ကလည်း 4.4.2 ဗားရှင်းကို ပေးနေတော့ အထက်ပါ နည်းလမ်း အတိုင်းပဲ မြှင်တင် ထားတာပါ။
၂။ ဗားရှင်း မြှင့်ဖို့ရန် အတွက် Settings > More > About Device > Software Updates > Update ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
မိမိဖုန်း အတွက် Official က သက်ဆိုင်ရာ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို ထုတ်ပေး ထားပြီးသား ဆိုရင်တော့ တွပ်ပီ ကံကောင်းမှာ ပေါ့ဗျာ....
နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်းကို ကွန်ပျူတာမှ တင်နည်း
ဒီတစ်ခါ ကျနော် ပြန်လည် မျှဝေချင် တာကတော့ ဖုန်းက Android Version တွေကို ကွန်ပျူတာမှ တင်ယူ နည်းလေးပါ။
၁။ ပထမဆုံး Samsung Kies နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို ဒေါင်းလော့ ရယူ လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အင်စတော လုပ်နည်းကို အောက်က လင့်မှာ ၀င်လေ့လာပြီး လိုအပ်ရင် ဒေါင်းယူ လိုက်ပါ။
Samsung Phone & Tablet တွေအတွက် မရှိ မဖြစ်တဲ့ Entertainment ဆော့ဝဲ
၂။ Samsung Kes ဆော့ဝဲကို ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော လုပ်ပြီး ရင်တော့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက် လိုက်ပါ။
၃။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက် ပြီးလို့ Connected ဖြစ်တဲ့ အခါ အောက်ကပုံ အတိုင်းပြနေ ပါလိမ့်မယ်။ Basic Information ဆိုတာကို တစ်ချက် နှိပ် လိုက် ပါ။ မြင်နေ ရတဲ့ ပုံအတိုင်း ပါပဲ သင့်ဖုန်း အတွက် New firmware is available ပြနေ ခဲ့ရင်တော့ သေချာ သွားပါပြီ သင့် အတွက် နောက်ဆုံး ဆိုတာကို Update လုပ်ယူ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ ပုံအတိုင်း မြင်နေရ ရင်တော့ ဗားရှင်းမြှင်ရန် အတွက် ကျနော် အပြာလေးနဲ့ ၀ိုင်းပြ ထားတဲ့ Firmware Upgrade button ဆိုတာကို နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
၄။အောက်က ပုံအတိုင်း ပြနေ ခဲ့ရင်တော့ terms of the agreement ကို ပြောနေတာ ဖြစ်ပါတယ် မြှားနဲ့ ထိုးပြ ထားတဲ့ I have read all of the above
Information ရဲ့နေရာမှ လေးထောင့် ကွက်လေးကို အမှန်ခြစ်ပေး လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Start Upgrade ဆိုတာကို ထပ်နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
Start Upgrade ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပြီး ဗားရှင်း စတင်မြှင့်နေ တုန်းမှာ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ USB ကြိုးကို ဖြုတ်မိတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
အချိန် အနည်းငယ် ကြာအောင် စောင့် ပေးလိုက်ပါ အားလုံး ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းက သူ့ အလိုလို Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်၊ ပြန်တက် လာတဲ့ အခါမှာတော့
သင့်ဖုန်းလေးမှာ Official ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင် နေ ပါပြီ။
ဖုန်း၊ Tablet အားလုံးမှာ Official ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို Odin ကို အသုံးပြု၍ ဗားရှင်းမြှင့်တင်နည်း
ဒီတစ်ခါ ကျနော် ပြန်လည် မျှဝေသွားချင် တာလေး ကတော့ Odin ဆော့ဝဲကို အသုံးပြု ပြီး Official ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာ အလွယ် တကူ Upgrade လုပ်နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပထမဆုံး Samsung Phone Driver ကို အောက်က လင့်မှာဒေါင်းလော့ ရယူလိုက်ပါ၊ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာမှာ အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။
Samsung USB Drivers များကို ဖုန်းအမျိုး အစား အလိုက် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင်ပါပြီ
၂။ Odin ဆော့ဝဲကို အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလော့ ရယူလိုက်ပါ။
၃။ Samsung Firmware များကိုတော့ မိမိ ဖုန်းရဲ့ မော်ဒယ် အလို Official ဆိုက်မှာ အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ပြီး စိတ်ကြိုက် ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကလင့်မှာ ၀င်လေ့လာ ကြည့်လိုက်ပါ။
အကောင့် တစ်ခု ဖွင့်ပြီး Samsung Official ရဲ့ Firmware အားလုံးကို လိုသလောက် ဒေါင်းလော့ ယူနိုင်ပါပြီ
၂။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
၃။ ဖုန်းကို Download Mode ၀င်ပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Volume Down Key, Home Button and Power key ကို တွဲနှိပ် ထားပါ။ အနည်းဆုံး5to 8 မိနစ်လောက် တွဲနှိပ်ပေး လိုက်ပါ။ အောက်က ဘယ်က အခြမ်း ပုံအတိုင်း Warning ဆိုပြီး ပေါ်လာတဲ့ အခါ ဘယ်ဘက် အခြမ်းမှ ပုံအတိုင်း ပြနေ ပါလိမ့်မယ်။
အသံချဲ့တဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပေး လိုက်ပါ၊ အဲဒါ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို Download Mode ၀င်ပြီး ပါပြီ။
၄။ ဒေါင်းလော့ ရယူ ထားတဲ့ Odin ကို Zip ဖိုင်နဲ့ ဆိုရင်တော့ Extract files ဖြင့်ဖြေ လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် ဖွင့် လိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက် လိုက်ပါ။
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်း ပြောစရာ ရှိပါတယ်။ ကျနော် အနီရောင် လေးနဲ့ ၀ိုင်းပြ ထားတဲ့ နေရာ တွေကို သတိထားစေ ချင်ပါတယ်။
(က) ဖုန်းကို USB ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက် လိုက်တဲ့ အခါ အပေါ်ဆုံးက ID: COM နေရာမှာ အပြာရောင်လေး ပြနေ ရပါမယ်။
(ခ) ဒုတိယ အနီရောင်လေး အတန်းမှာ ကျနော် အမှန်ခြစ် ပေးထားတာ တွေ့ ပါလိမ့်မယ်၊ တကယ်တော့ Odin ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ နှစ်နေရာမှာ
အမှန်ခြစ်က Auto ခြစ်ထား ပြီးသား ဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်လို့ အမှန်ခြစ်လေး ရှိမနေ ခဲ့ရင်တော့ အမှန်ခြစ်ပေး ထားပေးပါ။
(ဂ) တတိယမြောက် အနီရောင်နဲ့ ၀ိုင်းပြ ထားတဲ့ Pit စသည်ဖြင့် သူ့အောက်မှာ လေးခု ပါဝင် ပါတယ်။
(ဃ) ဖုန်းရဲ့ အမျိုး အစား အလိုက် ဒီနေရာမှာ အနည်းငယ် ကွဲပြားခြားနား ကြပါတယ်၊ မိမိဒေါင်းလော့ ရယူလာတဲ့ Firmware ထဲမှာ တကယ်လို့
သင့်ဖုန်းအမျိုး အစားအရ လေးခုလုံး လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့ Official ရဲ့ Firmware မှာတင် တစ်ခါတည်း တန်းပါ လာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
(င) တစ်ခုချင်း စီကို ထည့်ဖို့ရန် အတွက် Pit ဆိုရင် Pit ဆိုတဲ့ စာသားကို တစ်ချက်နှိပ် လိုက်ပြီးရင် စောနားက ဒေါင်းလော့ ရယူ ထားတဲ့ Firmware ဖိုင်ထဲက
Pit နာမည်နဲ့ ပါတဲ့ File ကို ရွေးပေးရမှာ ဖြစ်သလို တစ်ခြား Bootloader, PAD, Phone, CSC စသည်ဖြင့် တစ်ခုချင်း စီကို ရွေးထည့် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(စ) ID: COM နေရာမှာ အပြာလေး ပြထာနဲ့ Message ဆိုနေရာမှာ စာတန်း အနည်းငယ် ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ အောက်က ပုံကို အသေအချာ
ကြည့်ပါ၊ အားလုံး အသင့်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ Start ဆိုတာကို နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
(ဆ) Start ဆိုတာကိုနှိပ် လိုက်ပြီး တာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ USB ကြိုးကို လုံးဝ မဖြုတ်မိ ပါစေနဲ့ ဘာမှ ထပ်လုပ် စရာ မလိုတော့ပါ ဒီအတိုင်း စောင့်ကြည့်နေ လိုက်ရုံပါ။
၅။ အချိန် နည်းငယ် ကြာပါမည်။ ID: COM စာတန်းရဲ့ အထက် bottom နေရာမှာ အစိမ်းရောင် အတန်းလေး စတင်ပြေးနေ ပါလိမ့်မယ် အဲဒီ အရောင်လေး စတင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ မိမိဖုန်းမှာ လည်း Firmware ကို စတင် install လုပ်နေ ပါပြီ။ အချိန် အနည်းငယ် စောင့်နေ လိုက်ပါ။
အစိမ်းရောင် တန်းလေး ပြီးတဲ့ သွားတဲ့ အထိ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ အစိမ်းရောင် အတန်းလေး ပြည့်ပြီး တာနဲ့ အောက်က ပုံအတိုင်း Odin မှာ Pass ဆိုပြီး ပြနေ ပါလိမ့်မယ်။ Message နေရာ မှာလည်း Success ဆိုပြီး
စာသားတွေ ပြနေ ပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းမှာလည်း Firmware ကို install လုပ်ပြီးလို့ Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်း ပါဝါ ပွင့်ပြီးတက်လာတဲ့ အခါမှ Odin မှ Exit ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက် ထားတဲ့ USB ကြိုးကို အားရ ပါးရသာ ဖြု တ်လိုက် ပါတော့ဗျာ...
အထက်ပါ Odin ကို အသုံးပြု ပြီး Firmware တင်နည်းသည် စိတ်ချရပါသည်။ လေ့လာ ခါစ ညီအကို တွေကို ကျနော် အထူးမှာချင် တာကတော့
ဒီလိုမျိုး စတင် ကလစ်တာကို စတင်တောမယ် ဆိုရင် ကြောက်ကြောက်နဲ့ မလုပ်စေ ချင်ပါ၊ တကယ်တော့ အခက်ကြီး မဟုတ်ပါ၊ လုပ်ပေါင်းများ လာရင်
အဆင်ပြေ လာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းနဲ့ တင်ယူမယ် ဆိုရင်တော့ မိမိ ဖုန်းကို Official ကချပေးတဲ့ နောက်ဆုံး ဆိုတဲ့ Firmware တွေကို စိတ်ကြိုက်
install လုပ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ခင်ဗျား....
From : ဇူးနစ်(နည်းပညာ) www.zunite.org
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 27, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Phone Application, Root, Samsung